အဘယ်ကြောင့်ငါအိမ်ထောင်သည်ဒီတော့လူငယ် Get ခဲ့? — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
အဘယ်ကြောင့်ငါအိမ်ထောင်သည်ဒီတော့လူငယ် Get ခဲ့?
မနေ့ကငါအနည်းငယ်သောအရာတို့ကိုဖမ်းပြီးမှစတိုးဆိုင်မှာနှောင်းပိုင်းတွင်ညဥ့်အခါရပ်တန့်လုပ်ကိုငါငွေရှင်းကောင်တာတွင်နှင့်အတူတစ်ဦးအလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်စကားပြောဆိုမှုခဲ့. သူမသည်ငါ့ပစ္စည်း scan ဖတ်အဖြစ်ကျနော်တို့သေးငယ်တဲ့ဆွေးနွေးချက်လုပ်, ပြီးတော့သူမငါ့ကိုလျှော့စျေးကဒ်ကိုကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမယ်ငါသည်ငါ၏မယားကိုပြီးသားတစ်ရှိခဲ့ပါတယ်သူမ၏သို့ပြောသည်. စကားဝိုင်းမှာပျော်စရာတယ်သောအခါင်. ငါရှေ့တော်၌အကြိမ်ပေါင်းများစွာရှိခဲ့ဖူးတဲ့အကြောင်းကြောင့်ငါသည်ခပ်သိမ်းသောလည်းကောင်းစွာဤစကားဝိုင်းသိ. ဒါဟာဤကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုဝင် ...
လူ: ဘာ!? သငျသညျလက်ထပ်င်?
ငါ့ကို: yeah ငါနှစ်ဦးနှင့်တစ်နှစ်ခွဲအံ့သြဖွယ်နှစ်ကြာလက်ထပ်ခဲ့ပြီးပြီ.
လူ: အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ? သင်တစ်ဦးကလေးများကဲ့သို့ကြည့်ရှု.
လူ: သင်တို့သည်ဤမျှငယ်ရွယ်င်! သငျသညျကမ်ဘာ​​ပျေါတှငျအဘယျကွောငျ့ပြုပါလိမ့်မယ်?
တွင် 2009, ငါနှစ်ဆယ်တယောက်သည်အသက်၏အနိုင်နိုင်ဥပဒေနှင့်အနိုင်နိုင်ဂုဏ်သရေရှိအသက်အရွယ်မှာလက်ထပ်ပြီး. ငါ၏အပိုးပန်းစဉ်ကာလအတွင်း, စေ့စပ်ထားခြင်း, တိုလက်ထပ်ထိမ်းမြား, တဖန်ငါတူမေးခွန်းများကိုအချိန်နှင့်အချိန်လို့မေးခဲ့ကြရတယ်, "အဘယ်ကြောင့်ဤမျှငယ်ရွယ်နဲ့လက်ထပ်ရ? မာပင်ကဘာလဲ?”, နှင့်ငါ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကြိုက်ဆုံး, "သင်စောင့်ဆိုင်းနှင့်သင့်အသက်တာကိုခံစားသင့်တယ်!”
ဤမေးခွန်းများကိုမေးရှေးရှေးတချို့ကသူစိမ်းခဲ့ကြ, သို့သော်အချို့မိသားစုခဲ့ကြ. ဒီလိုတစ်ဦး "လူငယ်မှာကိုလက်ထပ်ဖို့အရူးခဲ့သည်” အသက်အရွယ်?
ကမျြးစာကကောလိပ်ကျောင်းတစ်တသောင်းရှစ်နှစ်အရွယ် freshman အဖြစ်, ငါတက်ကြွစွာဇနီးတစ်ရှာနေမခံခဲ့ရ, သို့သော်လည်းဘုရားသခင်သည်သူ၏စိတ်နှလုံးပြီးနောက်လူငယ်တစ်ဦးမိန်းမအားငါ့ကိုမိတ်ဆက်မထိုက်မတန်သည်ကိုမြင်. သူမသည်လှပသောခဲ့သည်, ဒါပေမဲ့ပိုပြီးအရေးကြီးတာသူမယရှေုခစျြ. သူမကဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်၏လိုအပ်ချက်အတွက်အပြစ်ရှိသောသူခဲ့ကြောင်းသတိပြုမိခဲ့, သူမတစ်ဦးနှိမ့်ချခဲ့သည်, teachable နှလုံး. ကျနော်တို့အတူတူခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းများ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ခြင်းတက်အဆုံးသတ်, ဒါကြောင့်ငါကသူ့ကိုအစေခံစောင့်ကြည့်ဖို့လေ, ကြီးထွား, နှင့်သစ္စာရှိရှိအခြားသူများအားသူမ၏အချိန်ပေး. ငါသူ့အကွောငျးကိုငါ့အတွင်းစိတ်စက်ဝိုင်းမှပြောဆိုရန်စတင်. ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းများ, လမ်းညွှန်, နှင့်သင်းအုပ်ဆရာအားလုံးသဘောတူခဲ့ – သူမတစ်ဦးဘုရားရေးရာမိန်းမ. ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်သူမ၏နှင့်အတူလမ်းလျှောက်နှင့်ငါ၏အသက်တာ၏ကြွင်းသောအရာများအတွက်သူမ၏မေတ္တာရှင်တွေ့မြင်နိုင်.
ဤအချိန်အားဖြင့်သာငါလက်ထပ်ထိမ်းမြား၏အဖြစ်မှန်ကိုစဉ်းစားရန်စတင်ခဲ့ပြီးကတစ်သက်တာအဘို့တစ်စုံတစ်ဦးကမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျူးလွန်ဖို့ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာ. ငါမရင့်ကျက်ခြင်းနှင့်လုံလောက်တာဝန်ယူခဲ့ဖြစ်စေမကိုယ့်ကိုကိုယ်မေးလျှင်. ငါကမျြးစာကိုတဆင့်ရှာဖွေကာလင်ယောက်ျား၏တာဝန်ဝတ္တရားစဉ်းစား, နှင့်လက်ထပ်မိတ်ဆွေများနှင့်လမ်းညွှန်မှနှုတျဆကျ. ဆုတောင်းပဌနာစကားပြောဆိုမှုအများကြီးပြီးနောက်, ငါ၏အလမ်းညွှန်နှင့်ငါ့အသင်းတော်၌အသင်းအုပ်ဆရာငါသည်သူတို့မသူမ၏မှီအောင်လိုက်ဖို့အဆင်သင့်ပဲလို့ပြောတယ်. ငါဘုန်းကြီးခဲ့. ငါဝိညာဉ်ရေးသူမ၏ဦးဆောင်လမ်းပြရန်ပြင်ဆင်ထားမဟုတ်ခဲ့ထင်လျှင်သို့သော်လည်းငါသည်သူမ၏ လိုက်. မဟုတ်ဘူး, သူ့အဘို့ပေး, တစ်မိသားစု၏ဦးခေါင်းကိုဖြစ်.
ကျနော်ငယ်လက်ထပ်ရတဲ့တစ်ခါတစ်ရံ ok သော naysayers မ​​ှသက်သေပြရတယ်နဲ့တူပထမတော့ငါခံစားရတယ်. ငါကမျြးစာ၌ကြည့်သောအခါသို့သော်လည်းငါသည်တူပစ္စည်းပစ္စယမတှေ့, "အိမ်ထောင်ရေးသေဆုံးညီမျှ! ကထံကပြေးသွား!” သို့မဟုတ်, သငျသညျမဆိုကြာကြာကြောင့်ပယ်မထားနိုင်သည့်တိုင်အောင် "လက်ထပ်ထိမ်းမြားကိုချွတ်ထားပါ,” သို့မဟုတ်, သငျသညျဘဝကိုပျော်မွေ့ဖို့အသက်ကြီးလွန်းနေသောအခါ "သာလျှင်လက်ထပ်ရန်,” သို့မဟုတ်, "ခဏတစ်ဘို့လယ်ပြင် Play ထို့နောက်အကောင်းဆုံးတစ်ကောက်။”
အဲဒီအစားငါတူပညတ်တော်ကိုတွေ့, "နုပျိုတပ်မက်ပြေး”, ငါသုတူကျမ်းပိုဒ်ကိုဖတ် 18:22 ကပြောပါတယ်, "မယားကိုရသောသူသည်ကောင်းသောအရာကိုတွေ့ရှိခြင်းနှင့်ထာဝရဘုရားထံတော်မှကျေးဇူးတော်ကိုခံရ၏။”
ဒါကြောင့်လူလို့ပြောလာသောအခါ, "ဘာဒါကြောင့်လူငယ်ကိုလက်ထပ်ဖို့သငျသညျသိမ်းယူ?” အကြှနျုပျ၏အသစ်တုန့်ပြန်ဖြစ်ပါသည်, "သင်မှားမေးမြန်းပါတယ်။” ငါကမေးခွန်းများ၏အမြစ်မှာလက်ထပ်ထိမ်းမြားငါ့ကိုပယ်တစ်ခုခုခိုးယူသောယူဆချက်သည်ထင်, ဒါကြောင့်ပေါ့ပေါ့ပျော်မွေ့ခြင်းနှင့်မမြဲသောအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည့်အခါငါ့အလူငယ်ကျူးလွန်ကိုယ်ကျိုးမေတ္တာ၌ဖြုန်းခံရလျှင်အဖြစ်.
အိမ်ထောင်ရေးဘုရားသခင်ထံမှအဆင်းလှသောဆုလက်ဆောင်ဖြစ်ပါသည်! ဒါဟာကျေးဇူးတရားတစ်နည်းလမ်းများဖြစ်ပါသည်. ငါသည်တဇနီးကိုတွေ့, နှင့်ကောင်းတစ်ဦးအရာဖြစ်ပါသည်. ငါကဆိုပါတယ်သောယုတ္တိဗေဒနှင့်အတူသဘောမတူဘူး, နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်တတ်နိုင်သလောက်ညျဘုရားသခငျ၏အချမ်းသာဆုံးကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုချွတ်ပယ်. အဲဒီအစားငါသည်ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းသောလက်ဆောင်များကိုပျော်မွေ့နှင့်သူ၏ဘုန်းအသရေဘို့ထိုသူတို့ဘဏ္ဍာစိုးဟုပြောလိမ့်မယ်.
ဤသူသည်ငါပြု၏ရသောအခါလူတိုင်းနဲ့လက်ထပ်ရသင့်ကြောင်းပြောပါသည်မဟုတ်. ငါအဆင်သင့်ခဲ့ရှေ့၌ငါနဲ့လက်ထပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြမယ်ဆိုရင်ဒါဟာမကောင်းတဲ့ကျော်သွားပြီ. ကျွန်တော်တို့ကိုတချို့ကပိုပြီးရင့်ကျက်ဖို့လို, ကိုအခြားသူများအားရောငျ့ရဲအဘို့ဆုတောင်းကြလော့နှင့်သခင်နှင့်သူ၏အချိန်ကိုက်ယုံကြည်ကိုးစားရန်လိုအပ်ပါတယ်. အကြှနျုပျ၏ရည်မှန်းချက်အငယ်ကိုသင်နှင့်လက်ထပ်ရသည်ဟုဆိုသည်မဟုတ်, ပို. သန့်ရှင်းသောအသင်. ကိုယ့်ကျွန်တော်လူကြီးနှောင့်နှေးခြင်းနှင့်ကျွန်တော်တို့သုံးဆယ်သို့မဟုတ်အထက်င့်တခါမှသာလက်ထပ်ထိမ်းမြားစဉ်းစားသင့်ကြောင်းဒဏ္ဍာရီကိုထှနျးလငျးချင်.
ငါဒါငယ်ရွယ်လက်ထပ်နောင်တလျှင်နောက်ဆုံးည twitter အပေါ်တစ်စုံတစ်ဦးကငါ့ကိုမေးတယ်. ငါ့အဖြေကို? လုံးဝမဟုတ်ဘူး.
ဒါဟာအစဉ်အမြဲငါဖန်ဆင်းအကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်တွေထဲကတစ်ခုဖွင့်. ငါမနှစ်ဦးနှင့်တစ်နှစ်ခွဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းခဲ့သည်ထက် ပို. ပျြောရှငျနှင့်သီးအခြားရယ်, နှင့်ကောင်းတစ်ဦးအရာပါပဲ. ငါအချို့စူပါရှားပါးသော Anomaly ရယ်လိုထင်ရစေချင်ကြပါဘူး. ငါထက်နည်းတူငယ်ရွယ်သို့မဟုတ်အငယ်လက်ထပ်ပြီးတဲ့သူရှေးရှေးများများသိ. သူတို့လညျးလက်ဆောင်အဖြစ်လက်ထပ်ထိမ်းမြားကိုမွငျလြှငျ, သူတို့ကဆုကြေးဇူးကို၏အသီးကိုမြင်ကြပါတယ်. ငါနှင့်ငါ့ဇနီးယခုငယ်ရွယ်ဖြစ်စေခြင်းငှါ, ငါမူကားကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာ၏အဆုံးသည်အထိကောင်းစွာကြှနျုပျ၏မယားကိုချစ်ရန်ကျေးဇူးတရားဆုတောင်းတာပါ. ထို့နောက်အချိန်အထိငါသုတ္တံ၏ပညာစကားကိုနားထောငျနှင့် "ငါ့လူငယ်၏မယား၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိချင်တယ်။”
Jannon ပက်ထရစ် • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 6:58 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါလေးလေးစားစားကီဗင် Ferere နှင့်အတူသဘောမတူဘူး. သငျသညျဘုရားသခငျသညျသောသူသည်ကိုမသိမှီတိုင်အောင်သင်သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်အဘယ်သို့မသိနိုငျ, ဘုရားသခငျသညျမတ်ေတာသစျသောကွောငျ့! ကမျြးစာကိုပတ်ပတ်လည်တွဲသို့မဟုတ်တရှာတွေ့မှတခြားသူတွေနဲ့အပြန်အလှန်ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့အကြောင်းဘာမှမပြောပါဘူး. တကယ်တော့, ဣဇာက်သည်ရေဗက္ကာအပေါ်အပေါ် layed နှင့်သူမကိုသူ့အဘို့တသိ. သူကပတ်ပတ်လည်နေ့စွဲအမှုကိုမပြုသို့မဟုတ်သူမပိုကောင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်သူရာခေလသည်သူလိုခငျြသို့မဟုတ်မသောအရာကိုတကယ်ကြီးဖြစ်စေမသိမယ်လို့ဖို့လအောစကားပြော.
ငါ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံကနေ Speaking, ငါနေ့စွဲအခြားသူများကို ပြု. မဟုတ်ခဲ့သောအရာကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုတွေ့. ငါ့ကိုယ်ပိုင်ဆက်ဆံရေးကိုမှမသာ, ဒါပေမယ့်ငါ့မိဘများထံမှ’ အစ်မတွေ’ ဆက်ဆံရေး. အဆိုပါပြဿနာခဲ့သည်, သူတို့နှုတ်ကပတ်တော်သို့မဟုတ်ဘုရားသခင့်မေတ္တာတော်အပေါ်အခြေခံပြီးဆက်ဆံရေးမဟုတ်ကြနဲ့သူတို့ထွက်အလုပ်လုပ်ကြဘူးဘာကြောင့်ဖြစ်ပါသည်. ငါဘုရားရေးရာက Man ရှာတွေ့ကိုပြု, ဒါကြောင့်သင်ပြောသောလမ်းထွက်အလုပ်လုပ်နိုင်, ဒါပေမဲ့ငါစိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ငါဆိုင်းလင့်လျက်နှင့်ငါ့အဘို့လက်ျာမဟုတ်ကြသောသူတို့ကိုအခြားဆက်ဆံရေးကိုမှငါ့နှလုံးစောင့်ကြပြီလျှင်ယုံကြည်, ငါအများကြီးပိုကောင်းနည်းကျိုးပဲ့သောအနေအထားတွင်ဖြစ်ရပြီလို, မှတဆင့်လုပ်ကိုင်ဖို့ခရီးဆောင်အိတ်များနှင့်အတူဘုရားရေးရာအမျိုးသမီးရဲ့ရှုထောင့်ကနေကျွန်မခင်ပွန်းအစားထက်ကျိုးအမျိုးသမီးရဲ့ရှုထောင့်လက်ခံရရှိရန်.
မလေးစားတဲ့ရည်ရွယ်ခြင်းမရှိပါ, ဒါပေမယ့်ငါကယ့်ကိုမှားယွင်းတဲ့လမ်းကြောင်းလူငယ်တို့၏စိတျနှလုံးခုတ်မောင်းနိုင်မယ့်အကြီးအကျယ်မှားပါစောင်ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်. (vs တွဲဘုရားရေးရာနှင့် ပတ်သက်. Google ကသတင်းအချက်အလက်. ခေတ်သစ်ချိန်းတွေ့. အချို့သောတကယ်ကောင်းသောပစ္စည်းပစ္စယလည်းရှိပါတယ်။)
Deborahfatuade • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 6:59 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဒီ awsome ဖြစ်ပါသည်
KevinFerere • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 6:59 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
သင်တို့သည်လည်းမှန်ငါ့ကိုသက်သေပြ. သမ္မာကျမ်းစာကလိုလားသမျှပြောနိုင်ပါတယ်, သင်မူကား, အတှေ့အကွုံသင်တို့တွင်အပယ်သွားဖို့ရှိသည်အပေါင်းတို့င်. အဘယ်သူကိုသငျသညျဘုရားသခငျသညျကိုပဌနာသငျသညျဆုံးမဩဝါဒပေးနေတာပါသောအရာကိုတစ်ဦးထှမှလာနှင့်သင့်အတွေ့အကြုံများကို. အဆုံးမှာ, သင်သည်အဘယ်သို့ယုံကြည်တဲ့ရွေးချယ်မှု, ဒါပေမဲ့သင်သည်အဘယ်သို့သိအဖြစ်မှန်အားဖြင့်အပေါ်သို့ချမှတ်သည်.
ထိုအ yeah, ကြေညာချက်နည်းနည်းယေဘုယျဖြစ်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်ဆား၏ဘောဇဉ်နှင့်အတူယူသင့်ပါတယ်, ဘာမှ၌ရှိသကဲ့သို့.
Lokelani70 • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:00 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါသည်လည်းတလေးတစားကီဗင် Ferere နှင့်အတူသဘောမတူဘူး.
သက်သေပြခဲ့သောတစ်ခုတည်းသောအရာသငျသညျဘုရားသခငျသညျအဘို့သင့်အသက်ကိုသူ၏စကားအားဖြင့်အသက်ရှင်ရန်မသြတ္တပ္ပစိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖန်ဆင်းသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်, ကမျြးစာကို. သွားရမည်အကြောင်း, ကျွန်တော်တစ်ဦးဘုရားရေးရာအိမ်ထောင်မှာကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာဖြင့်အသက်ရှင်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ရာ၌ခန့်ထားပြီ, ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်. ဒီကိစ္စကို၏အချက်ဖြစ်ပါသည်, ဘုရားသခငျသညျတစျဦးရဲ့အသက်တာ၌ပထမဦးဆုံးကိုမထားလျှင်တစ်ဤ blog ၏ပြီးပြည့်စုံသောဥာဏ်ရှိသည်မည်မဟုတ်.
KevinFerere • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:00 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါတစ်စုံတစ်ဦးကငါ့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူပြီဘယ်သို့သောအားဖြင့်ကိုယ်အဘို့ဘုရားသခငျတှေ့ဖို့သတိဆုံးဖြတ်ချက် လုပ်. မရင့်. မစိုးရိမ်ပါနဲ့, ကိုယ့်သင်တို့ကဲ့သို့ဖြစ်ဖို့အသုံးပြု.
AC အ • အောက်တိုဘာလ 3, 2013 တွင် 5:53 ညနေ •
ကိုယ့်ပြောချင်ပါတယ်, သငျသညျဘုရားသခငျသညျကိုမတှေ့နိုငျ. ကမျြးစာကိုအကြှနျုပျတို့သသေနေကပြောပါတယ်. သေလွန်သောသူတို့သည်လူအလျှင်းမပွုနိုငျ. ဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုတွေ့ရှိ.
အိုး… ငါဒါစိတ်မကောင်းကီဗင်ပေါ့, သငျသညျမရောထွေးစေရမည်. ငါကိုးကွယ်သောဘုရားသခင်၏ Self-ရှာဖွေနေသူတစ်ဦးဘုရားမဟုတ်. စိုးရိမ်စရာဘုရားသခင်၏အလိုတော်မဟုတ်ပါ, ဒါပေမယ့်အဖြစ်တာသူကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်သောသူအဖြစ် eachother မေတ္တာရှင်ဖြစ်ပါသည်! ငါယခင်ကရေးသားခဲ့သည်လိုပဲ, ပထမဦးဆုံးဘုရားသခင့ချပြီး complete ဤ blog ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်လိုသည်ကားအဘယ်သို့, သင့်ရဲ့ပြန်ကြားချက်ကိုငါ့အမှတ်ထေူအဖြစ်. ကျွန်တော်တို့ပြောလုပျသမြှသညျဘုရားသခငျမှနှစ်သက်စေခြင်းငှါ. ဘုရားသခင့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအံ့သြဖွယ်ညဦးယံ၌ကောင်းကြီးပေးခြင်းနှင့်တို.
Fru-Mukete အာနိုး • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:00 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Hahaha, ရှာဖွေလျက်စောင့်ရှောက်စေ, သငျသညျအထံတော်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်- သတိရဖန်ဆင်းခြင်းလည်းကိုယ်တော်ကိုထုတ်ဖော်ပြသ. တကယ်တော့, ငါသည်သင်တို့ကိုတစ်လှည့်ကွက်ပေးမယ်, ရုံကမျြးစာကိုကောက်ယူပြီးပုံပြင်စာအုပ်ကအပေါငျးတို့သတောင်းဆိုမှုများသတိပြုနှင့်ပင်ထိုအခါသူတို့ကိုကျက်မှတ်လိုပစ်သွား, အခြားစာအုပ်တွေထွက်စစ်ဆေးနှင့်တောင်းဆိုမှုများကိုနှိုင်းယှဉ်. ဒါပေမယ့်ကျိန်းသေသင်အရာတွေကိုရှင်းပြဖို့တစ်စုံတစ်ဦးကိုလိုအပ်ပါလိမ့်မည်, သငျသညျအမှနျတရားကိုရှာဖွေသူများမှာကတည်းကပြန်ကိုင်ကြပါဘူး.
သငျသညျဘုရားသခငျကိုယုံကြည်ပါသလောက်သင်တို့ပြုပွောဆိုအဖြစ်, သင်သည်အဘယ်ကြောင့်ဤမျှလောက်သူ့ကိုသက်သေပြရန်လိုအပ်ကြောင်းခံစားရပါဘူး? ငါသည်ဘုရားသခင်၏ရန်မလိုပါ, သောကွောငျ့သူဟာငါ့ကိုင်. ငါကိုယ်တော်ဖြစ်၏နှင့်သူသည်ငါ့ကိုဖြစ်ပါသည်. သို့သျောလညျးငါစိတ်မကောင်းပါဘူး, သငျသညျသငျနိုင်နားမလည်နိုင်?
Delinabini • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:01 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
KevinFerere • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:01 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါ့အမှားပါ, typing error တစ်ခု: *ငါသည်ဘုရားသခင်၏သက်သေပြစရာမလို။ *
သို့သော်ထိုမှတ်ချက်ကမိန့်ဆိုလိုသည်. မည်သို့ပင်သငျသညျအထဲမှာ, ကြောင်းသင်ကားအဘယ်သို့. သင်ကမှားရဲ့ဆုံးမသွန်သင်နေရုံကွောငျ့အမှနျတရားကိုလကျခံဖို့ကြောက်လန့်ခြင်းမရှိကြ.
Addis Hunter • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:01 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
100 % မင်းနဲ့အတူ! ငါအရမ်းမှာကျွန်မခင်ပွန်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ 20 တစ်နှစ်ကြာပြီးနောက်ကျွန်တော်တို့လက်ထပ်ခဲ့ကြ. ငါကျပန်းသူစိမ်းတွေနဲ့အတူတူစကားပြောဆိုမှုများရှိသည်ဖို့ခဲ့ကြ, မိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်ငါစကား၌ discribed သောလမ်းအတွက်သခင်ဘုရားနှင့်သင်တို့၏ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဇနီးအပေါ်သစ္စာနေဖို့ရန်သင့်အားအားပေးချင်. ကျွန်မခင်ပွန်းနဲ့ကျွန်မယခု 30 အသက်အနှစ်နဲ့ကျွန်မလူတွေကိုပြောပြသောအခါငါဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ် “ဝမ်းသာစရာ” နီးပါးအိမ်ထောင်သက် 10 နှစ်ပေါင်းသူတို့ပငျ့!!! “အမှန်”?? ၏တူညီသောမရေမှတ်ချက်များဖော်ဆောင်ရေး “ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်ဖြုန်း” စတာတွေစတာတွေ. သို့သော်ဘုရားငါပြု၏ရသောအခါကျွန်မခင်ပွန်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ကြဖြစ်ကြောင်းကိုဘယ်လိုမင်္ဂလာစကားထုတ်ဖော်ပြောဆိုမရှိမဖြစ်နိုင်အောင်သနားတတ်သောကျွန်တော်တို့ကိုကျေးဇူးပြုခဲ့. ကျနော်တို့အတူတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောလိပ်နှစ်ပေါင်းအပေါ် reminising တတ်, အသက်ရှင်ခြင်းရှေ့ဆက်သည်ငါတို့အဘို့ရှိပါတယ်သမျှသောကြီးသောအမှုတို့ကိုအကြောင်းကိုအိပ်မက်! ငါတို့မှာရှိတယ်2လမ်းခရီးတွင်လှပသောမိန်းကလေးများနှင့်တစ်ဦးကလေးသူငယျ (ကျွန်တော်တို့နှိမ့်ချယခုနှစ်အဘို့ဆုတောင်းနှငျ့ဘုရားသခငျပေးသနားကြောင်း) , (atually ယနေ့ငါကြောင့်ပေါ့ ;-))..ကျွန်တော်တကအတူတူကျွန်တော်တို့ကိုရောက်စေဖို့ဘုရားသခင်ထံမှတစ်ဦး devine ပြည်ထောင်စုကြောင်းကိုပိုပြီးဧကန်အမှန်ဖြစ် couldnt.
သဘာဝကျကျ, ကျွန်တော်တို့စုံလင်သောမဖြစ်ကြ (ကျွန်တော်တို့သစ်စာမဲ့၏ဘုံလောကပြဿနာများကိုရင်ဆိုင်ရ dont သောကြောင့်, ငါ၏အဆွေဒါကြောင့်ထင်ဟန်ပေမဲ့, မလေးစားတဲ့နှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်စကား), ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့သဘောထားကှဲလှဲမှုရှိပြုပါ, စိတျအပွောငျးအလဲ, ဘဏ္ဍာရေး dificulties စသည်တို့ကို, ခြားနားချက်ကျွန်ုပ်တို့၏ခြေလှမ်းများဦးတည်ဖို့ဘုရားသခငျအပေါ်ကိုအားကိုးပါဖြစ်ပါတယ်, ကျနော်တို့အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်လေးစားယုံကြည်ခြင်းကိုဆုံးရှုံးဘယ်တော့မှငါတို့၏ကိုယ်အကောင်းဆုံးကြိုးစားကြည့်ပါ, ဆက်သွယ်ရေး, စုံတွဲတစ်တွဲနှင့် individually..My ခင်ပွန်းကအစဉ်အမြဲငါတွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးစလုံးဟာအိမ်ထောင်ရေးမှာပျြောရှငျမှုသော့ချက်လုပ်နေတာသို့မဟုတ်ဝယ်ယူရန်မဟုတ်ပါကြောင်းနားလည်ဆုံးထူးခြားသောလူတစ်ဦးချင်းစီသည်အဖြစ်နှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်ထဲကနေလမ်းညွှန်မှုကိုရှာခြင်း “အမှုအရာ” ငါတို့သည်ခရစ်တော်ကို၌နေသော eachother ကိုပျော်ရွှင်ပေမယ့်သိစေ, လက်ထပ်ထိမ်းမြားအကြောင်းကိုပညတ်တော်တို့ကိုအောက်ပါနှင့်ခြွင်းချက်မရှိအချင်းချင်း Loving, မခွဲခြားဘဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုဒါမှမဟုတ်ငါတို့သည်အဘယ်သို့ may “ခံစား” ခဏမှာ , ကပျော်ရွှင်မှုအတွက် သိ. အမြဲပျောက်တတ်ကြောင်းယာယီစိတ်ခံစားမှုဖြစ်ရလိမ့်မည်, ဒါပေမဲ့စစ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်သာသခင်ဘုရားထံမှလာ.
ငါလမ်းဖြင့်လည်းသင့်ရဲ့ဂီတ Love ;)..
ယောရှု • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:01 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
သငျသညျသူတို့အမြိုးသမီးမြားစှာဆကျဆံသှားရာလမျး၌ဘုရားသခင်၏ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းချင်သူအသငယျခရစျယာကွီးစှာသောစံနမူနာဖြစ်ကြောင်း! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! ကိုယ့်စေ့စပ်တယ်, နံနက် 22, လာမှနှစ်ပေါင်းအိမ်ထောင်မှာသခင်ဘုရားအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ရန်မျှော်လင့်!
Johnny_renteria • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:02 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဒါကြောင့်ယုံကြည်သို့မဟုတ်မပေမယ့်ကိုယ့်ရဲ့အသက်အရွယ်မှာလက်ထပ်ပြီး 18. ငါမလမ်းအတွက်ဘဏ္ဍာရေးသဘောအရတစ်ဦးခင်ပွန်းကဖြစ်ဖို့အဆင်သင့်ခဲ့ငါပြီးသားဖခင်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်. ဒါပေမယ့်ကိုယ့်ခရစ်တော်ထံသို့ငါ့အသက်ကိုအပ်ခဲ့ငါနှင့်အတူရှိ၏မိန်းမတယောက်ငါနှင့်အတူကြီးထွားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သိထား. ပြည်သူ့အဖြစ်ကောင်းစွာငါ့ကိုအတူတူပင်အမှုအရာကိုတောင်း. ကလက်ထပ်ထိမ်းမြားတဲ့မကောင်းတဲ့အရာအဖြစ်ရှုမြင်သော်လည်းငါကဝမ်းနည်းစရာတွေ့ပါ. ယနေ့တွင်, ငါစဉ်းစားခဲ့ငါကလူကအခြားလူတဦး၏တာဝန်ယူပြီး၏အတွေးနီးပါးမဖြစ်နိုင်ဒါကြောင့်တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ဖြစ်လာကြပြီနိဂုံးဆီသို့ရောက် လာ. ,. အိမ်ထောင်ရေးသောအခါသင်သည်အဘယ်ကြောင့်လက်ထပ်အကြောင်းဒါပေမယ့်လက်ထပ်ထိမ်းမြားပတ်လည်မှာဗဟိုပြုသောသူသည်အကြောင်းမဟုတ်. ထိုသို့ခရစ်တော်ဖြစ်သင့်…
ဒေဗောရ • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:02 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ကိုယ့်ဦးလက်ထပ်သူတစ်ဦး frnd ရှိလက်ျာ trip..i r ထင် @ 19 (သူတို့နှင့်လက်ထပ်ခဲ့ hv46 yrs NW)ဎယခုကျွန်တော်တို့သူမ၏ဘဝ dat အတွက်ခရစ်တော်လက်ခံမှခွဲသဘောပေါက်သူမ၏ @ lkng သူမအစဉ်အဆက်ဖန်ဆင်းတော်မူပြီအကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်dဖြစ်ပါတယ်….ကိုယ့်ကိုယ့်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဖြစ်ကြောင်းကိုဝန်ခံရမယ်သော်လည်း2ရဈချင်ကြပါဘူး cos married..it ငါ့ကို scares2ချိတ်ဆက်ခံရ2d မှားပုဂ္ဂိုလ်4ငါ့အသက်ကို၏ဃရာကြွင်းလေသမျှပေမယ့်ကိုယ့်သညျယရှေုငါ့ကိုဃမှားရွေးချယ်စရာစေဘယ်တော့မှသိ…ဒါ့အပြင်ကိုယ့်တခါတရံကိုယ့်ယရှေုထံမှဈချင်အားလုံးရလာတဲ့အခါ y ကလက်ထပ်ရန်တွေးမိဎသူသည်ငါ၏ hrt brk ဘယ်တော့မှနိုင်?….ur ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ခဲ့ဎဈဦးတက် thumbs GV4အရာ!:)
MNM103 • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:02 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
လှံ Peterson • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:02 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Awesome ကို. ငါ့သားလည်းလက်ထပ်ပြီး21/2 လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်တစ်အံ့သြဖွယ်ဘုရားသခင်ရေးရာမိန်းမအားနှင့်သူတို့နှစ်ဦးစလုံး၏မှည့်သောအသက်ကြီးခဲ့ကြ 19. သင့်ရဲ့ပုံပြင်သူတို့ထဲကငါ့ကိုသတိပေး.
Brandon ကလီ • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:02 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါသည်ဤခရီးစဉ်ကိုချစ်! ငါမှာလက်ထပ်ပြီး 22 ငါလုံးဝကိုငါ့အိမ်ထောင်ကိုခစျြတဲ့. ကိုယ့်တစ်ဦးလွန်ခဲ့သောတစ်လအကြောင်းဓာတ်ဆီဆိုင်လက်ထောက်နှင့်အတူအလားတူစကားပြောဆိုမှုကြောင့်ဒါဟာရယ်စရာင်. သူမသည်တပြင်လုံးကိုဆွဲထုတ်, “သင်တို့သည်အဘယ်ကြောင့်အခမဲ့နို့ရှိသည်နိုင်သည့်အခါလက်ထပ်ရန်?” မေးခွန်းနှင့်ငါ့နှလုံးသူ့အဘို့ကိုဖဲ့. ထိုအခါငါသည်ငါ့ဇနီးတစ်ဦးနွားမမဟုတ်ခဲ့ကြောင်းသူမ၏ပြောပြရန်သွားလေ၏–သူမကြောက်မက်ဘွယ်ကြီးနှင့်သူမကိုချစ်ကြောင်း.
ခရီးသွား • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:02 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
= D ကိုသငျသညျရယ်စရာပါပဲ loool
Louib2001 • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:02 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
အန္န • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:03 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဒီကယ့်ကိုအကြှနျုပျအားပွော. ငါရယ် 21 တစ်ဦးဆက်ဆံရေးအတွက်နဲ့ငါရယ်ကြားခဲ့ဖူးတဲ့ပုံကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာသငျသညျမပြောနိုင် “ငယ်ရွယ်လွန်းဆင်းဖြေရှင်းစဉ်းစားခံရဖို့”, ငါစောင့်သင့်ပါတယ် “ဘဝပထမဦးဆုံးနထေိုငျ”, ငါပိုးပန်း / အိမ်ထောင်ရေးကိုရိုက်ထည့်မီကကျောင်းတွင်ပြီးစီးခြင်းနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတည်ထောင်. သင်တစ်ဦးအံ့သြစရာများနှင့်ဖှယျသက်သေခံချက်များ. ငါအတူတူသင်နှင့်သင့်ဇနီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာများနှင့်ပျော်ရွှင်မှုတစ်သက်တာဆန္ဒရှိ!
အမည်မသိ • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:03 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါဖြစ်၏ 20 ငါသဖြင့်လက်ထပ်ရမယ့်မဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်နှင့်တစ်ဦးဆက်ဆံရေးအတွက်ဖြစ်ဖူးဘူး 21 ဒါပေမယ့်ငါကျိန်းသေသင့်ရဲ့ယုတ္တိဗေဒလေးစားလိုက်နာ. အစဉ်မပြတ်ငါစိတ်ဓာတ်ထား “အသီးအသီးမိမိအဖို့”. ငါသည်သင်တို့နှင့်သင်တို့၏ဇနီးကျိန်းသေအကွာအဝေးသွားလိမ့်မည်နှင့်သင်တို့ကိုငါကြိုတင်လက်ထပ်ထိမ်းမြားဖို့ကိုယူသောခြေလှမ်းများ၏ဤမျှဂုဏ်ယူပါတယ်ထင်. သငျသညျနှစ်ယောက်စလုံးအရမ်းလေးလေးနက်နက် COMMITTEE ပထမအကြိမ်ယူလိုကြည့်, ငါချီးကျူး.
တိုနီ Doyley • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:03 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
အစောပိုင်းအသက်အရွယ်မှာအိမ်ထောင်ကိုအကြောင်းသင့်ရဲ့ Blog ကိုဖတ်ရန်အလွန်မင်္ဂလာရှိသော. ကျွန်တော့်ဇနီးမှာလက်ထပ်ပြီး 18 ကျနော်တို့အဘို့အပျော်ရွှင်စွာလက်ထပ်ပြီ 10 ယခုအနှစ်. ငါတို့သည်အချို့သောအတက်အကျခဲ့တယ်သေချာတာပေါ့, ငါမူကားဘုရားသခငျသညျဤသူအပေါင်းတို့အနှစ်တဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းညွှန်မှုနှင့်ယခုကျနော်တို့အစဉ်အဆက်ထက် သာ. တန်ခိုးကြီးကြယုံကြည်. သင့်ရဲ့အံ့သြဖွယ်သက်သေခံချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်.
KLE ဓါတ်ပုံပညာ • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:03 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
သင့်ရဲ့နုပျိုလက်ထပ်ထိမ်းမြားအပေါ်ဂုဏ်ယူပါသည်! ကျွန်တော်တို့လက်ထပ်ရသောအခါကျွန်မခင်ပွန်းနဲ့ကျွန်မအတူတူအရာရှောက်သွားလေ၏ 8 လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်မှာ 20 အသက်အနှစ်! ဒါကြောင့်ငါတို့သည်သင်တို့တဆင့်သွားနေတာပါအတိအကျဘာသိ! ငါကိုယ်ဝန်ဆောင်ကြောင့်လူတွေကကျွန်တော်တို့လက်ထပ်ထင် (ငါမဟုတ်ခဲ့) သို့မဟုတ်ရှိသောကြောင့်သူတစ်ဦးတရားမဝင်ကျွန်းတနိုင်ငံသားခဲ့သည် (သူတစ်ဦးအမေရိကန်နိုင်ငံသားင်). သူတို့ကတစ်ခုတည်းအရာလုပ်နေသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏ထောင့်၌အကြှနျုပျတို့၏မိတ်ဆွေအများကြီးရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါ. ယခုမူကားမှာ 28 သူတို့ပတ်ပတ်လည်လာဖို့ကြိုးစားနေကြတယ် “မီအောင်သွားသည်။” ငါသည်ဘုရားသခင်နှင့်မသက်ဆိုင်, ငါ့အသက်အရွယ်၏ကျွန်မခင်ပွန်းနှင့်ငါ့ကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာဝမ်းသာတယ်. ဘုရားသခငျသညျသငျတို့နှစ်ဦးစလုံးကိုကောင်းကြီးပေး!
BTW ကျနော်တို့ DMV ဧရိယာ၌နထေိုငျ! (MD) ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့အားလုံးတက်တွေ့ဆုံရန်နိုင်သည်သို့မဟုတ်အတူတူဘုရားကျောင်းသွား! ကျနော်တို့နေဆဲအရမ်းရယ်ရတယ်လက်ထပ်မိတ်ဆွေများရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး.
KevinFerere • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:03 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါဘာမှမသည်သင်တို့ထံကခိုးယူခံရခြင်းဖြစ်သည်မစဉ်းစားကြဘူး, ဒါကြောင့်သင်တက်ပေးခြင်းနေတာဘာ. ကျမ်းစာထဲမှာဖွဲ့စည်းပုံရှိသည်ဖို့အေးမြရဲ့, ဒါပေမယ့်သင့်အသက်တာ dictate ရန်သင့်အားတက်ဖွင့်, မစာအုပ်; ကထောက်ပံ့ပေးသောလမ်းညွှန်မှုနေသော်လည်း.
သန္နိဋ္ဌာန်နှင့်လူငယ်ဖြစ်ခြင်းခြီးမှမျးဒါဟာင်, ဒါပေမယ့်၏တစိတ်တပိုင်း “နုပျိုတပ်မက်သောစိတ်” သငျသညျတှေ့ဆုံနှင့်လူမှုရေးအရကွဲပြားခြားနားသောအမြိုးသမီးမြားပါဝငျမှရသင်ယူမှုနှင့်ကြီးထွားလာသည်. သငျသညျအဘယျသို့ကြိုက်နှစ်သက်သင်ယူခြင်းပြုလိုကြပါဘူး, မြင်, နှင့်ခံစားရ; အစားသင့်ရဲ့အတိုင်းအတာပဲလူတစ်ဦးမှဒါကန့်သတ်ဖြစ်ခြင်း၏.
သင်အမှန်တကယ်သင်နေသောသိနှင့်သင့်အကြောင်းပါပဲဘယ်သို့ဆိုမနိုင်, သို့မဟုတ်သင်တကယ်ချင်တောင်မှအဘယျသို့, သငျသညျပြုမူဒါပေမယ့်သူတို့ကိုသင့်အားပြသဘို့အခြားမိန်းမနှင့်ဤမျှလောက်ပြီမဟုတ်လျှင်. သင်ကမင့်အဘယျသို့မသိရပါဘူးလျှင်သင်အချစ်ဆိုတာသည်အဘယ်သို့သိရပါဘူး.
ဧည့်သည် • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:03 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
သငျသညျမတ်ေတာသည်အဘယ်သို့သိလျှင်သင်သည်အချစ်ဆိုတာမသည်အဘယ်သို့သိရန်မလိုအပ်ပါဘူး. တစ်စုံတစ်ဦးကသင်တစ်ဦးအတုပေးသည်ဆိုပါကသင်မည်သို့သိလိမ့်မယ် $100 ဥပဒေကြမ်းသငျသညျအဘယျသို့အစစ်အမှန်သိမဟုတ်လျှင် $100 ဥပဒေကြမ်းတူ. တစ်ဦးတည်းသာအမှန်တကယ်ရှိပါသည် $100 ဥပဒေကြမ်း, ကိုယ့်ကြောင့်လေ့လာသူတစ်ဦးဦးသင်တစ်ဦးအတုပေးသည်အခါသင်ပြောပြနိုင်. ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေနဲ့အတူတူ. များစွာသောအတုထွက်ရှိပါတယ်ရှိပါတယ်, သင်မူကားအစစ်အမှန်သည်အဘယ်သို့သိလျှင်, ထို့နောက်သင်အတုဆိုတာတွေ့ရနိုင်ပါလိမ့်မည်. ဘုရားသခင်သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်ကတည်းက, ဘုရားတရားမဲ့ဘာမှချစ်ခြင်းမေတ္တာမဖွစျနိုငျ.
KevinFerere • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:04 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ထို့ကွောငျ့အသင်တို့ပတ်လည်ချိန်းတွေ့ကြနှင့်အခြားလူများနှင့်လိင်ပြည့်မီခြင်းနှင့်ရှိရမည်. အတိအကျအကြှနျုပျ၏အမှတ်. အဘယျသို့သောသူတို့သည်အဓမ္မသည်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဖြစ်ပါသည်. ဒါကြောင့်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘာဝတွင်သောကွောငျ့သငျသညျအကွောငျးကိုတရားဖြစ်ဖို့ကြိုးစားစေခြင်းငှါ, သို့သော်, ဤစံနမူနာ၏သွားလာရင်းဆက်စပ်ကြားတွင်လွန်းမီးခိုးရောင်ဧရိယာရှိကွောငျးဖြစ်ခြင်းကြကုန်အံ့ရမယ်.
Angeldoll1 • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:04 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါကအခြားလူတို့နှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံသင့်ရဲ့ကြေညာချက်နှင့်အတူသဘောမတူ- STD ရဲ့, AIDS နှင့်မလိုချင်တဲ့ကိုယ်ဝန်, ထိုကဲ့သို့သောဆက်ဆံရေး၏အကျိုးဆက်များဖြစ်ကြောင်း. တဦးတည်းထိုကဲ့သို့သောဆက်ဆံရေးကိုလိုက်ရှာလိုလျှင်, သူတို့သငျ့လျြောသောကတိကဝတ်နှင့်ချစ်ခြင်း၏နက်ရှိုင်းခြင်းနှင့်ဝိညာဉ်ရေးရာရှုထောင့်မယ့်အစားတပ်မက်သောစိတ်အကြောင်းသင်ယူမညျမဟုတျ. မကြောင့်သင်တို့ကျူးလွန်ချင်ရှေ့မှာလည်းငါတစ်ဝှမ်းတွဲ ပတ်သက်. သင့်ရဲ့အမြင်များနှင့်အတူသဘောမတူ “ပတ်ပတ်လည်တွဲ” တစ်ဦး nonspouse နေတဲ့အိမ်ထောင်ဖက်သိရန်လိုအပ်ချက်မဟုတ်ပါဘူး. mutiple မိတ်ဖက်ရှိခြင်းသော်လည်းကျမ်းစာထဲမှာပုံဖော်အဖြစ်ဘုရားရေးရာတရားရုံးက / ချိန်းတွေ့လူသားကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်, ကျပန်းလိင်ဆက်ဆံတိရိစ္ဆာန်များ၏စရိုက်လက္ခဏာများမှာ.
AJ • အောက်တိုဘာလ 3, 2013 တွင် 3:46 ညနေ •
အားလုံး Non-အိမ်ထောင်ရေးလိင်သေချာပေါက်မှဦးဆောင်ကြောင်းစဉ်းစားရန်သင်၏ Angeldoll1it ရဲ့တော်တော်လေးရိုး “STD ရဲ့, AIDS နှင့်မလိုချင်တဲ့ကိုယ်ဝန်”… ဒါပေမယ့်သင်တန်း, သင်အချိန်ကိုခေါ်ဆောင်သွားကြပြီမဟုတ်လျှင်သင့်ဖုန်ထူအဟောင်းစာအုပ်ထဲကသင့်ရဲ့ဦးခေါင်းကရနှငျ့အခြို့ဘဝအတှေ့အကွုံရရှိကြောင်းသိမှာမဟုတ်ဘူး.
သငျသညျအနုတ်လက္ခဏာကမှာကြည့်ရှု. သငျသညျရင့်ကျက်ခြင်းနှင့်လုံလောက်သည်ပညာရှိသောဆိုရင်သင်ကအကြောင်းနည်းမှန်လမ်းမှန်သွားလိမ့်မယ်. ပို. သငျသညျအရာတစ်ခုခုကိုရှောင်ကြဉ်, အပိုနီးစပ်သင်ကမှလာ. ထိုလက္ခဏာကိုအာရုံစိုက်ခြင်းနှင့်သင်တို့ကိုရလိမ့်မယ်ဘာ. ဒါပေမယ့်သင်တန်းကိုသင့်ဘာသာတရားကိုသင်သင်ပေးပါဘူး.
ယောရှု • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:04 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
“သာ. မြတ်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာကဒီထက်အဘယ်သူမျှမရှိတယ်, ကတစ်စုံတစ်ဦးသည်သူ၏အဆွေတို့အဘို့မိမိအသကျကိုစှနျ့။” (ယောဟနျသ 15:13) သငျသညျခရစျတျောသိလျှင်သင်သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်အဘယ်သို့သိ.
ကျေးဇူးပြုပြီးဆရာ, သငျသညျကမျြးခကျြ regurgitate သွားနေမယ်ဆိုရင်, သငျသညျလုပျနိုငျအနည်းဆုံးကသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေးလျှောက်ထားသည်. ဒါဟာရည်ညွှန်းင်, မမိန့်ခွန်းလမ်းညွှန်.
သူမ • အောက်တိုဘာလ 3, 2013 တွင် 12:25 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ကျမ်းစာလာသည်ပေါ်တွင်သင်၏ယူမှားသည်နှင့်သင်ကမျြးစာကိုဒါပေမဲ့နောက်သို့မလိုက်ပါဘူးတဲ့သူခရစ်ယာန်တစ်ဦးအဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ထုတ်လုပ်တဲ့င်ထင်လမ်းကို “ကိုးကား” ထိုသို့ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် code နဲ့ကရွေးခြယ်အားဖြင့်အသက်ရှင်ဖို့ရှေးခယျြနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကိုရွေးယူ, ဘာမှဘုရားသခငျ၏ဖွင့်ကိုရည်မှတ်ကြောင်းအတိုင်းလိုက်နာလျှင်….
Gabe Taviano • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:04 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
သင်ဒီမှာခရီးစဉ် blogging ကြည့်ဖို့ nice! ယခုအပတ်ငါ့အဘို့ဆုတောငျးလအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, ဘုရားသခငျသညျသခြောကောင်းသောခဲ့.
သငျသညျဒါကြောင့်ငယ်ရွယ်လက်ထပ်အကြောင်းကိုအရူးအရာသည်သင်၏နားနဲ့မျက်စိအများကြီးပိုရှည်ဘို့သူ့ကိုပယ်ပိတ်ထားခဲ့ကြသောသူအချို့ထက်သင့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းပိုပြီးဘုရားသခင်အားဖွင့်လှစ်ပြီဖြစ်ပါတယ်. သငျသညျဘုရားသခငျသညျနည်းတူအများကြီးသင်တို့တွင်အနှစ်ဦးဖြစ်သကဲ့သို့သင့်အိမ်ထောင်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာသိ, နှင့်ကြီးမားသောင်. မျှဝေလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
Madeleine Farrell • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:04 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဒါကအကောင်းဆုံးအတွေးလုပ်ငန်းစဉ်တခုဖြစ်ပါတယ်. ငါမှာလက်ထပ်ပြီး 17 နှင့်ကျွန်မခင်ပွန်းခဲ့သည် 19. ထိုအချိန်ကကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်မဟုတ်ကြ, နှင့်လည်း, ကျွန်တော် '' ရန်ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါ’ လက်ထပ်ရန်. သို့တိုင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြု၏အချို့သောအကြောင်းပြချက်များအတွက်. ကျနော်တို့နီးပါးနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ကြ 28 1/2 ယခုအနှစ်, ၏မိဘများဖြစ်ကြ5နှင့်အဘိုးအဘွား 2. ငါသည်ကိုယ်အသက်ကို LOVE. ကျွန်တော်တို့ကိုတဦးမယ့်နောက်ကျောလာကိုပယ်ခြင်းနှင့်ဘယ်တော့မှလမ်းလျှောက်ဖို့လိုခငျြသောငါတို့အိမ်ထောင်ရေးမှာကြိမ်ရှိခဲ့သည်ဆိုဘဲ, အမျက်ဒေါသနှင့်မကျေနပ်မှုတစ်ရာသီအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝ၏တစိတ်တပိုင်းမဟုတ်ကြဟုပြောဖို့မ, သို့မဟုတ် EW ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာ၏အကြီးမားဆုံးအမှားလုပ်စဉ်းစားနေတဲ့အတွေး process ကိုမဟုတျကွောငျး. ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကျူးလွန်. ထိုအကွာရှင်းထားတဲ့ option ကိုမကသောအခါ, ဘုရားအချိန်အတွင်းအနာပျောက်စေသောအဆောင်တတ်၏.
ငါ့သမီးမှာလက်ထပ်ပြီး 20 သူမအစဉ်အဆက်ကလူမှရတယ်တယောက်အားပေးမှုကိုလည်းမရှိသေးသည်. လူကနောက်ဆုံးအပန်းဖြေအစားအချိန်မီကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရဘာကြောင့်သူမသည်နားမလည်ခဲ့ဘူး. တောင်မှခရစ်ယာန်အသိုင်းအဝိုင်းအကြား.
အခြားတစ်ဖက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏သားခရစ္စမတ်အချိန်မှာလက်ထပ်တယ်, ၏နှစ်အရွယ်တွင် 27. ရုံပိုင်ခွင့်မိန်းကလေးမတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း. တစ်ခု။. လက်ျာကောင်လေးက / မိန်းကလေးကိုပင်ခက်ခဲတဲ့ကြိမ်မှတဆင့်လက်ျာကောင်လေးက / မိန်းကလေးeသွား. ကိုယ့အဆိုပါလက်ဝါးကပ်တိုင်မှတွယ်ကပ်.
CL • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:05 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါကပိုသဘောတူနိုင်ဘူး. ဒါကြောင့်များစွာသောလူအိမ်ထောင်ရေးကိုအဓမ္မကြောင်းထင်ဟန်နဲ့မှမအကြောင်းပြချက်အထူးသဖြင့်ရှိ “ကျူပင်” စ, ဒါပေမယ့်ဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းစေခြင်းသုံးစွဲဖို့လိုလားကြောင်းအရာတစ်ခုခုသည်. ပို့စ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်!
ငါကမျြးစာ၌ကြည့်သောအခါ >> သို့သော်လည်းငါသည်တူပစ္စည်းပစ္စယမတှေ့, "အိမ်ထောင်ရေးသေဆုံးညီမျှ! ကထံကပြေးသွား!"သို့မဟုတ်, သငျသညျမဆိုကြာကြာကြောင့်ပယ်မထားနိုင်သည့်တိုင်အောင် "လက်ထပ်ထိမ်းမြားကိုချွတ်ထားပါ,"သို့မဟုတ်, သငျသညျဘဝကိုပျော်မွေ့ဖို့အသက်ကြီးလွန်းနေသောအခါ "သာလျှင်လက်ထပ်ရန်,"သို့မဟုတ်, "ခဏတစ်ဘို့လယ်ပြင် Play ထို့နောက်အကောင်းဆုံးတစ်ကောက်။ "
မိခင် • ဒီဇင်ဘာလ 9, 2014 တွင် 1:48 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါ့ဘလော့ဂ်ဖို့အလည်အပတ်ဘို့သင့်ကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ် – ငါသည်သင်တို့အဘို့အစာကျွေးခြင်း adedrss ထွက်နေသေးတယ်ထင် (ငါသည်ငါ့မှတ်ချက်များအတွက်ကြောင့် posted). သင်တစ်ဦး Darling မိသားစု, စကားမစပ်! သင့်ရဲ့နှစ်ပတ်လည်နေ့အပေါ်ဂုဏ်ယူပါသည်!
Praisemovement • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:05 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
သင့်ရဲ့င့်လင်းမြင်သာဘို့နှင့်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် “ယရှေုသညျကြည့်ကောင်းရှုကောင်းအောင်”. သငျသညျ bringin livin'and လမ်းကိုများအတွက်အရူးလေးစားမှု’ နှုတ်ကပတ်တော်အားဘုန်းအသရေ.
Andrea Paige Jackson က • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:05 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဒါကစိတ်ကူးသက်သေခံချက်ဖြစ်ပါသည်. တဖန်သင်တို့သတ္တုတွင်းနှင့်ငါ့ခင်ပွန်းရဲ့ဒသမနှစ်ပတ်လည်ပေါ်မှာ posted! (ကျနော်တို့ OLD လက်ထပ်ပြီး, သော်လည်း။) : )
Jcsmsoul • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:05 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဘုရားတဦးအစ်ကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူ! ကိုယ့်ကိုယ့်နောက်ပိုင်းမှာအသက်တာ၌သခင်အရှင်ကိုတွေ့ပေမယ့်ဦးဆိုလိုအတိအကျဘာကိုသိနှင့်ကိုယ်တစ်ဦးဘုရားသခင်၏အလိုတော်နှင့်ညီလူသည်မိမိမယားကိုသစ္စာခံ Hacking ကိုလက်ထပ်ခဲ့သည်ဆန္ဒရှိ! ဤအကြောင်းကိုရှာဖွေရန်၎င်း၏အလွန်ခဲယဉ်း dayz! နှင့်ကိုယ့်ကိုယ်လက်ထပ်ရ ur နဲ့လက်ထပ်ကြသောအခါချစ်ခြင်းမေတ္တာချတဲ့အခါဦးအပြစ်ခံစားရ dont ကြောင့်တစ်ခုဖြစ်သည်ရှာတွေ့မယ်လို့မျှော်လင့်ဆုတောင်းအခြားအကြောင်းပြချက်! ဘုရားတဦးကောင်းကြီးပေးတော်မူ!
Jazmin • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:05 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
အသီးအသီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာအဖြစ်လက်ထပ်ထိမ်းမြားမြင်ရပါလိမ့်မည်ဤမျှလောက်မကျေးဇူးတင်ပါသည်. ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၌ခိုလှုံခြင်းနှင့်ယုံကြည်သောသူတို့ကိုလိမ့်မည်သာ. ငါဟာအလွန်ငယ်ရွယ်စဉ်မှာမှာလက်ထပ်ပြီးမှ 28 အသက်အနှစ်ကြှနျုပျနှငျ့အကြှနျုပျ၏လင်ရှိ3လှပသောကလေးများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါတို့အဘကိုးကွယ်နှင့်ကိုးကွယ်ဖို့မြှုပ်နှံနေကြတယ်. အိမ်ထောင်ရေးသော်လည်းလွယ်ကူသည်မဟုတ်, အဲဒါကိုအတက်အကျင်သိရသည်သျောလညျးဘုရားသခငျ၏ကျေးဇူးတော်နှင့်ကရုဏာမှတဆင့်နဲ့သူ့အလိုတော်ကိုတဦးတည်းမှလက်နက်မချကြီးထွားနိုင်. ဒါကြောင့်စစ်မှန်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်သင့်ရဲ့အံ့သြဖွယ်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်များအတွက်အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါသည်. အကြှနျုပျ၏သခင်ဘုရားကိုသင်နှင့်သင်၏မယားငါသည်သူ၏ဉာဏ်ပညာကိုတောင်းခံပေါက်ပါစေဆက်လက်နှင့်သင်တို့၏မျက်နှာသာအတွက်ရှိသမျှသည်အများသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများအများဆုံး.
Tachy ဂီတ • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:05 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါဒါလက်ထပ်ပြီး “လူငယ်” အဖြစ်ကိုကောင်းစွာ, နှင့်ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်ပါသည်, အမြဲအတူတူကျနော်တို့ (သင်တန်းကျွန်တော်တို့ရဲ့သမီးအပါအဝင်), ကျွန်တော်တို့အရာအားလုံးကိုဝေမျှ, အသီးအသီးအခြားကူညီ, အချို့သော ppl သင်လက်ထပ်ဒါကြောင့်ငယ်ရွယ် get လျှင်တိုတောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုထင်, ဒါပေမယ့်ကျေးဇူးတင်စကားဘုရားသခငျသညျလုနီးပါး WE 8 အနှစ်နဲ့လက်ထပ်နှင့်အရေးအပါဆုံး servin ဖို့ကြိုးစားနေ’ ခပ်သိမ်းသောကာလမှာဘုရားသခငျသညျ…မင်္ဂလာသက်
Agopylove09 • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:05 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဒါကြောင့်ကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်ပါသည်!! im 25 လူအပေါင်းတို့သည်ကောင်းတစ်ဦးဇနီးဖြစ်ခြင်းများနှင့်အမှန်တကယ်လကျအောကျခံဖြစ်ခြင်းနှင့်သင့်အလယ်ဗဟိုအဖြစ်ဘုရားရှိခြင်းနှင့်အစဉ်အမြဲလူအပေါင်းတို့ကသူ၏ဆုံးမစကားရှာကြံ့အမှန်တကယ်ခရစ်တော်ဦးဆောင်ယူခွင့်များနှင့်ခရစ်တော်၏အစိုင်အခဲမြေပြင်ပေါ်တွင်ကြောင်းကြားဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်အတူကြွလာအဘယ်သို့သောအကြောင်းစဉ်းစားတွေးခေါ်ခဲ့ Ive ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကယ်တင်သောသခင်နှင့်အတူမေတ္တာ၌ jesus..falling အမှန်တကယ်တစ်ဦးမဖြစ်မနေဖြစ်ပါသည်!! ကိုယျတျောနှငျ့ရငျးနှီးသောဆကျဆံရေးကိုသင်ကြီးထွားခြင်းနှင့်တကယ်ကိုချစ်သောအရာကိုသိရန် alllows ကြောင်းရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခငျသညျဦးသင့်အိမ်ထောင်ဖက်မှပေးကြောင်းကိုမတ်ေတာသပေးပါသည်။. အမြဲထောက်ပံ့သူကားအဘယ်သူကယ်တင်သောသခင်အဘို့အဤမျှလောက်ကြီးစွာသော ..<3
ဂျိုး Stevens • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:06 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
နံနက်သုံးဆနှင့်အတူအပြည့်အဝသဘောတူတဲ့သူတစ်ဦးရှေး. သင်တန်းကကွဲပြားခြားနားသောလေဖြတ်သော်လည်း (အသက်အရွယ်မရွေး) ကွဲပြားခြားနားသောရှေးရှေးအဘို့. လူတိုင်းသူတို့၏ဘုရားသခင်-ဒီဇိုင်းအချိန်တွင်လက်ထပ်ရမယ်. ငါဖြစ်၏ 50 yrs အဟောင်းကို, ကျွန်မတုန်းကငါ့အရည်းစားမှလက်ထပ်ပြီး 23 သူမဖြစ်ခဲ့သည် 20! ယခု 27 နှစ်နှင့် 1 တစ်လအကြာမှာ, စဉ်ဆက်မပြတ်ရှိ (ကောင်းသော) ငါတို့စပ်ကြားမီးရှူးမီးပန်းများ, နေဆဲ madly မေတ္တာ၌, ဘုရားသခင့်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေများနှင့်လမ်းလျှောက်အတူတကှ. မယ်ဆိုတာငါအဘို့အလက်ထပ်အသက်ကုန်သွယ်မှုမဟုတ်6လကြာပြီးနောက်! သို့သော်တောင်ကိုငါ့ကလေးတွေဟာသူတို့ရဲ့ circumstacces သေချာပေါက်ငါတို့မှတူညီနေကြသည်မဟုတ်သိကြရပါမည်, မဟုတ်သလိုထိုသူတို့အဘို့ဘုရားသခငျ့အချိန်နှင့်အစီအစဉ်များကိုအတိအကျတူညီကြသည်.
Femi သန်းကြွယ်သူဌေး • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:06 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
နံနက်သုံးဆနှင့်အတူအပြည့်အဝသဘောတူတဲ့သူတစ်ဦးရှေး. သင်တန်းကကွဲပြားခြားနားသောလေဖြတ်သော်လည်း (အသက်အရွယ်မရွေး) ကွဲပြားခြားနားသောရှေးရှေးအဘို့. လူတိုင်းသူတို့၏ဘုရားသခင်-ဒီဇိုင်းအချိန်တွင်လက်ထပ်ထိမ်းမြားခဲ့သည်. ငါဖြစ်၏ 50 yrs အဟောင်းကို, ကျွန်မတုန်းကငါ့အရည်းစားမှလက်ထပ်ပြီး 23 သူမဖြစ်ခဲ့သည် 20! ယခု 27 နှစ်နှင့် 1 တစ်လအကြာမှာ, စဉ်ဆက်မပြတ်ရှိ (ကောင်းသော) ငါတို့စပ်ကြားမီးရှူးမီးပန်းများ, နေဆဲ madly မေတ္တာ၌, ဘုရားသခင့်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေများနှင့်လမ်းလျှောက်အတူတကှ. မယ်ဆိုတာငါအဘို့အလက်ထပ်အသက်ကုန်သွယ်မှုမဟုတ်6လကြာပြီးနောက်!
Reverandjeff • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:06 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ရှိသမျှတို့ကိုငါအရမ်းကောင်းစွာဒီတစ်ခုသိပါ… ကိုယ့်လက်ထပ်ထိမ်းမြားကျွန်တော်တို့ရဲ့ 13 နှစ်တွင်ကျင်းပ, နှင့်ကိုယ်ပေါ့ 35.. ငါတူရှေးရှေးငါ့ကိုတူညီသောလမ်းမေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့နှစ်ဦးစလုံးပဲဘုရားသခင်ကစီရင်ခဲ့သည်ကိုသိနှင့်ဒီဇိုင်း. ကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီကိုအခြားသူများကျောက်ဆူးဖြစ်ခြင်းတက်အဆုံးသတ်ဘယ်မှာမဏ္ဍိုင်အချိန်လေးမှာရဲ့အသီးအသီးကတခြားဘဝတွေကို intersected, ခရစ်တော်၏ဘုံကျောက်ဆူးတွေနဲ့. ကျနော်တို့ဆက်ဆံရေး / ထိမ်းမြားလက်ထပ်နှင့်အတူရုန်းကန်နေကြသူအငယ်လူတွေကိုဟောပြောပွဲဖို့အခွင့်အလမ်းရဖို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြွင်းချက်သက်သေခံချက်ကိုပြောပြရသည့်အခါအကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည် !!! အမှန်တကယ်, တချို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း JPaul နှင့်အတူဤအဆွေးနွေးမှုများအချို့ရှိခဲ့ပါတယ်။. အသေးစားကမ္ဘာကြီး !!! ဘုရားသခင်ကအခွင့်အရေးကိုတန်ဖိုး system ကိုရှာသောသူတို့သပေးတော်မူပြီ, ကျနော်တို့ chickenbones ပြီးနောက်အစား runnin ကျွန်တော်တို့ရဲ့နံရိုးတန်ဖိုးထား. :)
ဂျက်ဖ်လူငယ် • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:06 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
အိုးနှင့်စပ်စုများအတွက်, မှာကျွန်တော်တို့ကိုထုတ်စစ်ဆေး http://www.facebook.com/reverandjeff #GotAGodlyDime
Bobshumaker • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:06 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါ့အဖေ & mom အထက်တန်းကျောင်းချစ်သူတွေဖြစ်ကြသည်နှင့်သူတို့ဘွဲ့ရပြီးနောက်လက်ထပ် (နှစ်ဦးစလုံးခဲ့ကြ 18 အသက်အနှစ်). သူတို့ကပျော်ရွှင်စွာနေဆဲယနေ့တိုင်လက်ထပ်ဖြစ်ကြပြီးအတူတကွသူတို့ဘဝအကြောင်းကိုမဆိုနောင်တဖော်ပြဖူးဘူး. လူကြီးဖြစ်လာလက်ထပ်ထိမ်းမြားနဲ့စတင်စေခြင်းငှါ, – နှင့်သင့်ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကျွန်မရဲ့မိဘတွေကိုရည်မှတ်သင့်ရဲ့သဘောထားကို. ဘုရားသခင်၏အလိုတော်နှင့်ညီလက်ထပ်ထိမ်းမြားကဤရာစုအတွင်းအနည်းငယ်ဖြစ်ကြပြီးယခုအချိန်အထိအကြား….ဘုရားသခငျသညျသငျသညျကိုကောငျးကွီးပေးနှင့်အနည်းဆုံးအဘို့အမင်္ဂလာရှိ၏သင်သည်စောင့်ရှောက်မည် 50 သို့မဟုတ် 60 အနှစ်!
Monique-Jolicia • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:06 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Jeffreycotton7 • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:06 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါသည်သင်တို့၏ပုံပြင်များမျှဝေဘို့သင်နှင့်သင့်ဇနီးအများကြီးကိုကျေးဇူးတင်. ငါရယ် 21 ကိုယ်နီးပါးတူညီအခွအေနေတဆင့်မယ်တူခံစားရ. ကိုယ့်သေးနဲ့လက်ထပ်မဟုတ်ပါဘူး. သင်နှင့်သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ရှိကြ၏လျှင်ငါမြော်လင့်ဘာကြောင့်၏အတွေးအခေါ်တွေရှိတယ်, နှစ်ဦးစလုံးဝိညာဉ်ရေးရာများမှာ, အပြုသဘောဆောင်, အသီးအသီးကိုအခြားသူများမျက်စိအားဖြင့်စုံလင်သော. အကြှနျုပျ၏မိန်းကလေးနှင့်ကျနော်တို့တနေ့လက်ထပ်ရမယ့်ဖြစ်ကြောင်းသံသယမရှိပါဘူး. ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးစလုံးလက်ထပ်ရချင်သော်လည်း, သူမတစ်ဦးကိုယူသူမ၏အချိန်ပိုင်; ငါတို့သည်ဤလောကအမျိုးအစားလူတစ်ဦးအပေါင်းတို့၌အချိန်ရှိသည်. ငါ ASAP ကျွန်တော်တို့ကတိထားတော်ကြသည်မဟုတ်မနက်ဖြန်အမျိုးအစားလူတစ်ဦး၏ပိုမိပါတယ်. ဒါကြောင့်ဘာကြောင့်စောင့်ဆိုင်း? သူမသည်အလွန်စမတ်မိန်းကလေးသည်. သူသည်သင်၏ဇနီးနှင့်သူမ၏ဇာတ်လမ်း၏အနည်းငယ်ငါ့ကိုသတိပေး. အမှုအရာကျောင်းနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်၏လမ်းရစေခြင်းငှါ, စဉ်းစား. သို့သော်လက်ထပ်ပြီးနောက်ကလေးတွေ၏ဟောပြောချက်ဆီသို့ဦးတည်ပိုပြီးင်. ငါမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးကလေးအနီးကပ်ရှိသည်ဖို့ချင်ပါဘူးကြောင့်သူမ၏အမြဲပြောပြ 30 အသက်အနှစ်. ငါသည်ငါ့ကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်သောကြောင့်အသက်အားနည်းရတဲ့စတင်ချင်ကြပါဘူး, ငါ့အလေးတွေနှင့်အတူပတ်ပတ်လည်ကစားရန်ခက်ခဲပြီးပိုပင်ပန်းတယ်စေရာ. ငါလိုချင်တယ်7ဆုံးမှာ3ထိုအနည်းဆုံး. ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ကောင်းသောတစ်လျောက်ပတ်သောအသက်အရွယ်မှာစတင်ရန်. သို့သော်လည်းငါသည်အလွန်အကျွံကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်သညျဘုရားသခငျ၏လက်၌ထားခဲ့ဖို့ကြိုးစားကြည့်ပါဆက်လက်နှင့်မည်မဟုတ်.
aneetarh • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:07 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဦးဒါအများကြီးခရီးစဉ်ဎ Jesse ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်, ဎလူတိုင်း hu ၎င်းကိုတစ်လမ်းသို့မဟုတ်ဃ ODA အတွက်အားပေးစကား shared ဖြစ်ပါတယ်. ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးစလုံးဘုရားသခင်ကိုချစ်၎င်းကိုယခုကိုယ့်အစောပိုင်းတွင်လက်ထပ်ခဲ့သည်မရှိတော့အထူးသဖြင့် considern ဃတကယ်တော့ gettn ၏ကြောက်ပါတယ်ပေါ့. ဘုရားသခင်၌ bis…
dash • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:07 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Jannon ပက်ထရစ်, ငါသည်ဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်ကြောင်းသဘောတူ. စစ်မှန်တဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းချစ်ခြင်းမေတ္တာနေသူများကဖန်တီးသောသူတဦးတည်းကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်ဖြစ်ပါသည်. ကျနော်တို့အပြင်ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာဘဝတွေကိုပဲ့ပြင်ခွင့်ရှိပါသည်မဟုတ်လျှင်လူများအကြားကျွန်တော် caliber ဖို့ဘာမျှမဖန်တီးနိုင်. “သာ. မြတ်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာကဒီထက်အဘယ်သူမျှမရှိတယ်, သူကသူ့သူငယ်ချင်းတွေသူ့ကိုယ်အသက်ကိုစွန့” Jhn 15:13. ချစ်ခြင်းမေတ္တာတစ်ဦးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကျေနပ်မှုရှာတွေ့သည်မဟုတ် (KevinFerere), သို့မဟုတ်သင့်ဦးနှောက်ထဲမှာလျှပ်စစ် Impulses သတင်းပို့ကျေနပ်အောင်နှင့်လှုံ့ဆော်နိုင်သူတစ်စုံတစ်ဦးကိုရှာတွေ့. ဖြစ်ချင်တော့, အဆိုပါသင့်ရဲ့ရုပ်ပုံလွှာ “အာဒံ၏ဖန်ဆင်းခြင်း” သင့်ရဲ့စာမျက်နှာပေါ်တွင်မေတ္တာနှင့်ချိန်းတွေ့၏သဘောတရားနေပါစေအဘယ်အရာကိုတစ်စုံတစ်ဦးမှကုန်ကျစရိတ်တစ်ဦးချင်းစီဆန္ဒပြည့်အဘို့အရာတစ်ခုခုသို့လှည့်လာသောအခါခဲ့သည့် Renaissance ကာလမှလာ. သူ့ဟာသူအတွက်ပန်းချီအယူမှားကိုအာဒံကိုဘုရားသခငျထံအရောက်သွားကြောင်းဖော်ပြထားသည်နှင့်သူ၏ဖန်ဆင်းခြင်းအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူကြောင်း. အဆိုပါအမြီးအမောက်ဤ, သူပြုသောအမှုနှင့်နောင်တရဖူးသောအရာကိုသူ၏အသက်တာမြင်ရဲ့အဆုံးမှာ Michelangelo, ခရစ်ယာန်ဘာသာနှင့်လူ့ရောမွှေဖို့ကြိုးစားနေ (က Man ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို၏အတိုင်းအတာဖြစ်ခြင်း). ငါသည်သင်တို့ကိုမှလာနေကြသည်ထင်ရာချစ်ခြင်းမေတ္တာဒီသဘောတရားဖြစ်ပါသည် ? သူတို့ဂရိကျင့်သုံးနဲ့အတူတူပါပဲအရာဖြစ်ပါသည်, Renaissance, ယနေ့ဖွင့်ယဉ်ကျေးမှု. အဲဒီမှာတကယ်ဖြစ်ပါသည် “နေအောက်မှာအသစ်သောဘာမျှ”-ရှောလမုန်သည်, ထို့အပြင်ကျမ်းစာကနေ.
ရှင်ပေါလုဂျုံးစ် • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:07 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ကိုယ်ခဲ့ကတည်းကဟေးလက်ထပ်ခဲ့ခရီးစဉ် 22 နှင့် 28 ယခု. ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့6anv ခဲ့. ဘုရားနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူခဲ့ပါသည်4သားငယ်များ. သူကသင်နှင့်သင့်မိသားစုကောင်းကြီးမင်္ဂလာစောင့်ရှောက်သောဈဆုတောင်း.
Danz_17unlocked • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:07 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဒါဟာချစ်စရာကောင်းတဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်, မေလဘုရားသခငျသညျကွှယျဝစှာဦးနှင့် ur ဇနီးကောင်းကြီးပေးတော်မူ… နှင့်အခြားသူများ ^ _ ^ ဒီနေဖြင့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာbစေခြင်းငှါ <3
CLL • အောက်တိုဘာလ 3, 2013 တွင် 12:15 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
အဘယ်အရာကိုဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်သည်တစ်ဦးချစ်စရာကောင်းတဲ့သက်သေခံချက်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သူလုံးဝထံလက်နက်ချဖြစ်ကြောင်းဘဝအသက်တာ၌လုပျနိုငျ. ကျွန်မခင်ပွန်းနဲ့ကျွန်မအတော်လေးငယ်ရွယ်လက်ထပ်ခဲ့သည် (တွင် 24) သင်နှင့်သင်၏ဇနီးနဲ့တူ, ဘုရားသခင်သည်သူ၏ဘုန်းအသရေဘို့အအတူတကွကျွန်တော်တို့ကိုရောက်စေဖို့မထိုက်မတန်ကိုမြင်လျှင်. ကျွန်ုပ်တို့၏သားငယ်ရွယ်လက်ထပ်, အသက်အရွယ်မှာ 20 ယခုနှစ်အစောပိုင်းက…သက်ပြင်းရှူး :-) သူကျိန်းသေမိမိသန့်ရှင်းဇနီးအတွက်ကောင်းသောအရာကိုတွေ့ရှိရ. ငါတို့သည်သူ့ကိုအပိုဘာမျှမလိုချင်ကြောင့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာမယ့်.
Karenda • အောက်တိုဘာလ 3, 2013 တွင် 12:18 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
အဘယ်အရာကိုတစ်ဦးအလွန်ကြီးစွာသောဆောင်းပါး! ကျွန်မခင်ပွန်းနဲ့ကျွန်မကောင်းစွာအဖြစ်လက်ထပ်ငယ်ရွယ်တယ်, ငါခဲ့သည် 22 နှင့်ကျွန်မခင်ပွန်းခဲ့သည် 25. ကျနော်တို့ကျင်းပ 15 လက်ထပ်ထိမ်းမြား၏အနှစ်. ယရှေုသညျ, နှစ်ပေါင်းများစွာစုံတွဲတစ်တွဲအဖြစ်ပိုမိုနီးကပ်စွာအတူတကွကျွန်တော်တို့ကိုဆောင်ခဲ့တော်မူပြီ, ကျွန်တော်တို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေး “ကိုယျ့ကိုယျကိုမှသေဆုံး” ပိုကောင်းတဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာနိုင်ရန်အတွက်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားအစေခံ. တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်အများဆုံးလက်ထပ်ထိမ်းမြား၏နံပါတ်တစ်ဖျက်ဆီးသောသူဖြစ်ပါသည်.
မိုက်ကယ် • အောက်တိုဘာလ 3, 2013 တွင် 1:16 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့ကျွန်မမှာလက်ထပ် 21 အဖြစ်ကိုကောင်းစွာ, နှင့်ခဲ့ 11 နှစ်နှင့်6ကလေးတွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့ (ဇီဝ / မွေးစား / မွေးစား). ငါဖြစ်ခဲ့သည်မသိခဲ့ပါ “အလွန်ငယ်ရွယ်” လက်ထပ်ထိမ်းမြားရန်, ကိုယ့်သူမငါမပါဘဲအသက်ရှင်ရန်မလိုခဲ့ပါတသိ! ဘုရားသခင့ကောင်းသောခဲ့.
AJ • အောက်တိုဘာလ 3, 2013 တွင် 2:16 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ထိုလိုင်းများအကြား Reading: ကျွန်တော်ယရှေုခစျြကျွန်တော် horny ခဲ့ကြ.
ငါသည်ဤခရစ်ယာန်တွေကိုသူတို့တွင်လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ဖြစ်ပျက်မြင်အစစ်အမှန်လှုံ့ဆျောမှုပတ်ပတ်လည်ကခုန်တတ်ကြောင်းဤကဲ့သို့သောအငြင်းပွားမှုများ Hilary ဖြစ်ကြသည်ထင်. ဒါဟာလိင်ရှိသည်ဖို့အပွစျရှိဖြစ်ချင်ပါတယ်, ဒါကြောင့်တစ်ဦးတစ်သက်တာကတိကဝတ်သို့အဆောတလျင်ဖို့ဝေး သာ. ပညာရှိပါသည်တင့်.
Clara • အောက်တိုဘာလ 3, 2013 တွင် 2:21 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဘုရားသခင့အိမ်ထောင်ရေးဧကန်အမှန်အကအားလုံးကို ဖြတ်. သင်တို့ကိုတွေ့မြင်ရကြလိမ့်မည်စတင်ကြောင်း. သငျသညျငယျရှယျခရစ်ယာန်လူငယ်များနှင့်စုံတွဲများခရီးစဉ်တစ်ခုအားပေးမှုများမှာ. ဘုရားသခင်သင့်ကိုကောင်းချီးပေးပါစေ!!
ယောဘ • အောက်တိုဘာလ 3, 2013 တွင် 2:52 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါ၏အသက်အရွယ်မှာလက်ထပ်တယ် 21 နှင့်အတူတူပင်နှစ်တွင်သင်တို့ Lee ကခရီးစဉ်အဖြစ်, တွင် 2009. ငါခဲ့သည်သောအခါငါအသင်းတော်၌သူမ၏တွေ့ဆုံခဲ့ 16 အသက်ကျွန်တော်နီးပါးအတူတကွဖြစ်ရပြီ 8 ယခုအနှစ်. ကျနော်တို့ AYCM ဝန်ကြီးဌာနများနှင့်အတူဘုရားသခင့်ထမ်းဆောင်, ကျေးရွာပေါင်းထွက်ရောက်ရှိနှင့်ဖိလစ်ပိုင်၌ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝေမျှ. ကျနော်တို့နေ့စဉ်သုံးအသီးအသီးအခြားသို့ပြောသည် “ငါသည်သင်တို့ကိုဘုရားသခင်ကိုချစ်ဘယ်လောက်မြင်သောကြောင့်, သင်တို့ကိုငါခစျြ”. အစဉ်အမြဲငါအိမ်ထောင်မှာသူမ၏လက်တော်သည်သူမ၏တောင်းနောင်တမရကြဘူး. အတိတ်4လက်ထပ်ထိမ်းမြား၏အနှစ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခဲ့ပြီ.
THATMAN • အောက်တိုဘာလ 3, 2013 တွင် 2:55 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
https://twitter.com/KEVINFERERE <<< ဒီနည်းကိုကောင်လေးဖြစ်ပါတယ်?? ဟားဟား
ဣဇာက်သည် • အောက်တိုဘာလ 3, 2013 တွင် 4:06 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်အထွဋ်အမြတ်တည်းဟူသောအမှန်ပင်ဖြစ်ပါသည်. သုတ်တံ 18:22 ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဒီကရှင်းလင်းပြောပြ.
”အကြင်သူသည်ဇနီးတစ်ကောင်းတစ်ဦးအရာကိုတှေ့တှေ့, အ Lord'' နှင့်ကျေးဇူးတော်ကို.
နဲ့လက်ထပ်ဖို့လိုလားအကြင်သူသည်အဘို့အကြှနျုပျ၏ယူပထမနှင့်ဗွေဆော်လက်ျာဖက်ရွေးချယ်ရာတွင်၌ဘုရားသခင်ရဲ့လမျးညှနျအတှကျမေးမြန်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်. ကြှနျုပျတို့လူသားမြားကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်မှုလုပ် shouldnt နှင့် forcifully ကကောင်းကြီးပေးတော်မူရန်ဘုရားသခင့မေးမြန်းအဖြစ်. ထက်, ကျွန်တော်တို့စုစုပေါင်းနာခံလက်နက်ချသင့်တယ်, ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ထွက်သည်ကိုရောက်ရှိနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝသည်မိမိညှနျကွားခနောက်သို့လိုက်ရန်လမ်းညွှန်မှုတောင်းခံ.
SteveMcMillon • အောက်တိုဘာလ 3, 2013 တွင် 4:40 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါသည်ဤသိပ်လေးစား!! ၎င်း၏ဒါနဲ့ခဲ့စဉ်ကတည်းကအစဉ်အမြဲငါလက်ထပ်ရမယ့်အလိုဆန္ဒရှိခဲ့ကြပြီအားပေးအားမြှောက်6yrs အဟောင်းနှင့် alot လူများကငါ့ကိုချ. နညျးလမျးမြားစှာထဲမှာငါ့ကိုမလုံခြုံမှု created. ဒီနောက်တဖန်သင်တို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်!
Terry • အောက်တိုဘာလ 3, 2013 တွင် 4:59 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
အနည်းငယ်သောကျော် 35 လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းငါသည်ငါ့အထက်တန်းကျောင်းရည်းစားနဲ့လက်ထပ်. ကျနော်တို့နှစ်ဦးစလုံးခဲ့ကြ 18, နီးပါး 19. ကျနော်တို့အများကြီး naysayers ခဲ့, ငါ့အဖေကိုတောင်မျှော်လင့်ငါကွာရှင်းခြင်းနှင့်ဆရာဝန်တစ်ဦးကိုရှာဖွေရလိမ့်မယ်. ဘုရားသခငျသညျအိမျထောငျရေးစီစဉ်တဲ့အခါမှာဘာလာဆောင်သတို့သားသတို့သမီး၏အသက်အရွယ်နှင့်သတို့သားအရေးမပါဘူး. အတော်များများကကောင်းကြီးမင်္ဂလာ!
မစ်စီ • အောက်တိုဘာလ 3, 2013 တွင် 6:01 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ကျွန်မအပြင်ငယ်ရွယ်လက်ထပ်ခဲ့သည် (20 အတိအကျဖြစ်ဖို့). အခုတော့မှာ 32, သင်သည်မည်သည့်ပေးထားအသက်အရွယ်မှာမဆိုပေးထားအချိန်တွင်အကြင်သူသည်မှလက်ထပ်ရနိုင်သော်လည်းသကဲ့သို့ငါခံစားမိ… နှင့်ဘုရားသခင်ပိုနီးစပ်သည်ဟုလူတစ်ဦးမှကိုယ်တော်တိုင်ဆွဲရန်မဆိုအခြေအနေမျိုးအတွက်ကိုယ်တော်ကိုချစ်ကြောင်းပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုသုံးပါလိမ့်မယ်… သူသည်သန့်ရှင်းသောဖြစ်သကဲ့သို့သငျသညျဖြစ်ဖို့ရှိသည်အားလုံးအဘို့သန့်ရှင်းစေခြင်းငှါဆန္ဒရှိ. ငါရှိမယုံကြည်ကြဘူးဒါကြောင့်ဖွင့် “တ”… လက်ထပ်ဖို့ရှေးခယျြသူမဆိုပုဂ္ဂိုလ်များ, ဖြစ်လာသည် “တင့်” တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အသွားအလာများအတွက် :)
မစ်စီ • အောက်တိုဘာလ 3, 2013 တွင် 6:02 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဂျော်နီ • အောက်တိုဘာလ 3, 2013 တွင် 10:27 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်. ကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့ကျွန်မအလားတူဇာတ်လမ်းရှိတယ်. တစ်ဦးကမိတ်ဆွေတစ်ယနေ့ဒီ posted ကငါလိုအပ်သောအရာကိုခဲ့သည်. ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ကိုချီးမွမ်းကြလော့!
Lise • အောက်တိုဘာလ 3, 2013 တွင် 10:39 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဤဆောင်းပါးတွင်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်! ငါဖြစ်၏ 36 အသက်အနှစ်နဲ့ကျွန်မ 19yrs အိမ်ထောင်သက်ပါပြီ…ဟုတ်တယ်, ငါခဲ့သည် 17 ငါသည်ငါ့ 18yr ဟောင်းခင်ပွန်းလက်ထပ်သည့်အခါ! ကျနော်တို့ကိုခြောက်လေးတွေရှိတယ်, သခင်ဘုရားကိုချစ်ပြီးအလွန်ပျော်ရွှင်နေကြသည် :) ကလူကြိုက်များရွေးချယ်မှုကိုသို့မဟုတ်အများအပြားအဘို့အညာဘက်ကိုရှေးခယျြမှုမဖွစျစခွေငျးငှါနေချိန်မှာကျနော်တို့အလားတူမေးခွန်းများကိုလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်တောင်းနေကြတယ်, ငါငါတို့အဘို့အညာဘက်ကိုရှေးခယျြမှုလုပ်နိုင်အောင်ပျော်ရွှင်ယုံကြည်စိတ်ချရနေ့စဉ်ဖြစ်ကြောင်းကို.
Steffan • အောက်တိုဘာလ 3, 2013 တွင် 11:18 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဤသည်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်ပါသည်. ငါသည်ဤသည်သင်၏အသက်တာ၏အကြီးမားဆုံးအမှားဖြစ်ပါတယ်ထင်သူတွေကိုအများကြီးကိုသိ. ငါဖြစ်၏ 22 တကယ်ငါအထက်တန်းကျောင်းငါ၏ဒုတိယနှစ်ကတည်းကလူသိများနှင့်ချစ်တစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူဤစဉ်းစားခဲ့ကြ. ငါအမှုအရာသည်သင်တို့အတွက်နေရောင်ခြည်နှင့် Rainbow မဟုတ်သေချာဖြစ်ကြောင်းကို, မဟုတ်သလိုငါကငါ့အဘို့ဖွစျဖို့မြျှောလငျ့ထားပါဘူး. တန်ဆာရှိသမျှတို့ကိုငါအဆိုးမြင်စိတ်တွေဖယ်ချပြီးနှင့်ပိုကြီးတဲ့ပုံတစ်ပုံကိုကြည့်ဘို့သင့်ကိုခြီးမှမျးနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သင်သည်ဘုရားသခင်၏ရန်သင့်အားဦးဆောင်လမ်းပြခံစားခဲ့ရ. တခြားဘယ်သူမျှသင့်ကိုအစဉ်အမြဲပျော်ရွှင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်, ငါသညျအမှနျတကယျဖွစျပါ၏.
Kim က Hunter • အောက်တိုဘာလ 4, 2013 တွင် 8:30 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါမှာကျွန်မခင်ပွန်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ 14 ကျွန်မတုန်းကကျွန်တော်လက်ထပ်ပြီး 21 သူဖြစ်ခဲ့သည် 23 ကျနော်တို့အတူတကွပါပြီ 22 နှစ်နှင့်လက်ထပ်ဘို့ 15 သူတို့၏အမျိုးအ 22 ဘဝမှာလက်ထပ်ငယ်ရွယ်ယင်း၏ဖွင့်ပုံကိုပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကြည့်ရတဲ့နှင့်အတူရှိမယ့်ဘာမျှမမှားပါ….တကယ်ကသင်၏ lifr သင်ကလုပ်ကားအဘယ်သို့သောကွောငျ့….နှင့်ဟုတ်တယ်ငါနှင့်ငါ့ခင်ပွန်းကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်နှင့်ဘုရားကိုယုံကြည်ကျနော်တို့ဘုရားနှင့်အတူသူ့အဘို့ငါတို့အသက်နေထိုင်နေကြခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုအထူးသဖြင့်လွယ်ကူသောရှည် healthly မတ်ေတာရှိတဲ့အိမ်ထောင်ကိုဘာမျှမဖြစ်နိုင်သောကားဘုရားနှင့်အတူသင်ကဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်…….မင်္ဂလာဖြစ်!!
ဖေါ်ပြ: အဘယ်ကြောင့်ငါငယ်ရွယ်ဒါလက်ထပ်ရခဲ့ပါ? - ခင့်နိုင်ငံတော် Cakers ဒမ်း Cakers
Cherisse • အောက်တိုဘာလ 4, 2013 တွင် 9:43 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
သခင်ဘုရားကိုသိရန်နှင့်သူ၏စကားလုံးနားလည်ရန်အဘယ်အရာကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာ. ငါသည်သင်တို့နှင့်တူပိုပြီးလူတွေရှိခဲ့ဆန္ဒရှိ. မာရျနတျသငျသညျစိတျဓာတျမခံပါနဲ့. ကျနော်တို့ကသူနေရာတိုင်းသိ.
GrantYoung • အောက်တိုဘာလ 4, 2013 တွင် 12:44 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ကျနော်တို့သောအခါကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့ကျွန်မလက်ထပ်ပြီး 22 ငါအတူတူအတွေ့အကြုံရှိခဲ့. ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်. မသိမ်းရသေးသောခဲ့သူငယ်ချင်းများငါ့ကိုငါတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဖို့ပိုဘဝကိုခဲ့သိစေခငျြတ. အကြှနျုပျ၏ဆံငါလုပ်နိုင်အပေါငျးတို့သ Club နှင့်ပါတီများ၏ငါ့ကိုသတိပေး. အကြှနျုပျ၏ “ပိတ်” မိတ်ဆွေများကိုလေ့လာစူးစမ်းဖို့ပင်လယ်အခြားငါးယောက်ရှိကရှင်းပြသည်. ကောင်းစွာ, ကျနော်တို့ကတကယ်တော့တစ်ချိန်တည်းန်းကျင်လက်ထပ်ပြီး3သည်အခြားစုံတွဲများကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်အရွယ်လုပ်ခဲ့တယ်! ကျနော်တို့ကလူနည်းစုပေမယ့်ကျိန်းသေတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးကြောင့်သတိရဖို့အားပေးအားမြှောက်မယ့်.
ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ငါတို့သည်ရုံကျင်းပ3နှစ်နှင့်ကကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်ရဲ့! ခရီးစဉ်မျှဝေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်!
အမှတ် • အောက်တိုဘာလ 4, 2013 တွင် 4:24 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါ့အယူကိုသင်ငယ်ရွယ်ဒါလက်ထပ်ရမယ့်လျှင်ဖြစ်လိမ့်မယ်, သငျသညျပိုကောင်းဒါလုပ်နေတာ၏အကျိုးဆက်များကိုသိရ. သူကတောင်ခွအေနမြေား၏အလွန်အကောင်းဆုံးအတွက်အလွန်ခက်ခဲသည်. သငျသညျအခက်ခဲဆုံးသငျသညျအစဉျအမွဲအလုပ်လုပ်ခဲ့နှင့်လုံးဝစိတ်ပျက်စရာများနှင့်ကှေဲစာရေးနှင့်အတူယဇ်ပူဇော်ခြင်းအများနှင့်သဘောတူညီမှုင့်လုပ်ကိုင်ဖို့အဆင်သင့်မဟုတ်ခဲ့လျှင်, ထိုသို့ sign up ကိုမရကြဘူး. သို့သော်, သငျသညျခံနိုင်လျှင် (တချို့လူတွေကပြုပါ) အချိန်များတွင်ဆုချီးနိုင်ပါတယ်လျှင်.
ကီဗင် • အောက်တိုဘာလ 4, 2013 တွင် 5:42 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါသည်ဤသမ္မာကျမ်းစာကိုအခြေခံပြီးရှုထောင့်ကိုချစ်. ဒါဟာအမေရိကန်ခရစ်ယာန်တို့တွင်အရှားပါးင်, ယဉ်ကျေးမှုနှင့်လူမှုရေးအဆောက်အဦဒီတော့ Anti-လက်ထပ်ထိမ်းမြားရှိရာ, လူငယ်တစ်ဦးလူတစ်ဦးကိုတွေ့မြင်ရန်, ပင်အဟောင်းလူတစ်ဦး, ဘုရားသခင့အဖွဲ့အစည်း၏တန်ဖိုးအပေါ်ထိုကဲ့သို့သောဝိညာဉ်ရေးအရင့်ကျက်အမြင်ရှိ. ငါကိုဖတ်ပါတယ်မှတ်ချက်များအများအပြားပေါ်အခြေခံပြီး, လူတွေကိုဒါနိုင်ငံခြားဒီရှုထောင့်အသံ, ပင်အသင်းတော်၌ငါတို့သည်ကိုယ်ကိုကိုယ်ထိုနေ့၏လူမှုရေးစံချိန်စံညွှန်းဆီသို့ဦးတည်အမှီခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထက်ဘုရားသခင့တန်ဖိုးထားခြင်းနှင့်ဘဏ္ဍာခံရဖို့ရရှိထားသူသောအရာကို၏သမ္မာကျမ်းစာအမှန်တရား. သငျသညျခရီးစဉ်ဆုတောင်း, ဧဝံဂေလိတရားဝေမျှထားသညျဘုရားသခငျ၏စကားတျော၏အမှန်တရားလက်တွေ့ကျတဲ့နှင့်ယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာ၌အမှန်တကယ်လုပ်.
PastorRob • အောက်တိုဘာလ 5, 2013 တွင် 6:55 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါသည်သင်တို့ခရီးစဉ်သိစေချင်- Lee ကငါလက်ထပ်2ငါလှည့်လအကြာ 21. ဘုရားသခင့အားလုံး၌? သူကလူအမြင်နှင့်ကျွန်မချောင်းမြောင်းရန်လိုအပ်ကြောင်းလက်ထပ်ရမပြုလုပ်သင့်ဘာဖြစ်လို့အပေါ်သူတို့ရဲ့ဆင်ခြင်ခြင်းရှိနေသော်လည်းအားလုံးအထဲတွင်ခဲ့သည်. ဘုရားသခငျသညျငါ၏လူသည်လက်ထပ်ပြီ 16 နှစ်ပေါင်းယခုနှင့်အတူ2လှပသောမိန်းကလေးများနှင့်ငါဘုရားရေးရာပညာရှိသောသူအဘို့ဘုရားသခင့နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် Great ဖြစ်ကြောင်းကို, ဂုဏ်အသရေကိုအဖိုးတန်ရတနာ. သင့်ရဲ့သက်သေခံချက်အကြောင်းကိုဂုဏ်အသရေကိုသင်ပြောပြရန်အဘို့အကအဓိပ်ပာခဲ့သညျဖြစ်ပါသည်!!!
ဖေါ်ပြ: လူပျို v. အိမ်ထောင်သည်… | ဘဝရဲ့အဓိပ္ပာယ်
Mavis • ဇန္နဝါရီလ 28, 2014 တွင် 10:10 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါသည်ခပ်သိမ်းသောလူငယ်များအဘို့အကွံဉာဏျရှိ. သငျသညျရောက်နေတယ်ဆိုရင် 18 သို့မဟုတ်ကျော်, အိမ်ထောင်ဖက်ရှာနေစတင်ရန်! လိင်အပြင်ဘက်လက်ထပ်ထိမ်းမြားသင်တို့သည်အလျှင်းမပေမယ့်ကှေဲဆောင်ခဲ့ဦးမည်ဆိုပါက, ဝိညာဉ်နှင့်တကွမကောင်းတဲ့ကျန်းမာရေး leaness, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ. လက်ထပ်ဖြစ်ခြင်းဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းလည်းနှင့်စီးပွားရေးအာနိသင်တိုးမြှင့်ဖြစ်ပါတယ်! သင်တို့သည်ဤမျှအများကြီးပိုပြုမိခြင်းနှင့်ဤမျှလောက်ပိုပြီးသင်တစ်ဦးတည်းမဟုတ်ပါလျှင် lufe ပျော်မွေ့ရနိုင်. သူတို့ငယ်စဉ်အခါသူတို့၏စိတ်နှလုံးမလိုက်သောကြောင့်သင့်မိဘများဖြစ်နိုင်ကွာရှင်းတယ်! ရှိသမျှတို့ကိုငါကရှင်းပြဖို့နေရာမရှိဘူး, သင်မူကားဖြစ် built နေကြသည်အိမ်ထောင်ဖက်. ချက်ချင်းစရိုက်များရှိသည်နှင့်သင့်အားစိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ရှိစဉ်အခါငယ်ရွယ်လက်ထပ်ရမယ်၏ yor စာရင်းအောင် Start. ငါဖြစ်၏ 53 ပျော်ရွှင်စွာလက်ထပ်ဖြစ်ရန်နှင့်အလွန် grayeful. ငါမှာလက်ထပ်ခဲ့ပါတယ် 31 -သိပ်နောက်ကျဟဿဖြစ်သွားသောလူငယ်-လမ်းလမ်းလျှင်အကြိမ်ပေါင်းများစွာနှင့်စာရေးဝမ်းနည်းစရာကောင်းသော. သင်သည်သင်၏လူငယ်၌ပညာရှိဖြစ်ခြင်းနှင့်အထဲတွင်လက်ရှိဖြစ်ခြင်းကြောင့်ပျော်မွေ့လျှင်မျှော်လင့်ချက်ပြုမိ!
GOSPELMAGDOTCOM • ဖေဖေါ်ဝါရီလ 6, 2014 တွင် 8:33 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ချစ်ခင်ရပါသောခရီးစဉ် Lee က,
သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုပြင်သစ်သို့သင့်ရဲ့ဆောင်းပါးများကိုဘာသာပြန်ဆိုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ website တွင်သူတို့ကိုထုတ်ဝေရန်ဖို့ခွင့်ပြုချက်ပေးနိုင်တယ်လို့: gospelmag.com?
သနားခြင်းကရုဏာ • ဖေဖေါ်ဝါရီလ 15, 2014 တွင် 3:14 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ကျနော်တို့လူငယ်တစ်ဦးဖြစ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်. ဆယ်ကျော်သက်သောအခါငါ့မိတ်ဆွေငါ့ကိုဤစာအုပ်ကိုဝယ်, ခရစ်ယာန်အမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုဂုဏ်တင်ခဲ့သည်. သင်တန်းကလက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းနှင့်အရာခပ်သိမ်းပြီးနောက်သည်အထိစောင့်ဆိုင်းနေအားပေးအားမြှောက်နဲ့တစ်လျှောက်လုံးကျမ်းပိုဒ်ခဲ့. ဒါဟာဖော်ပြခဲ့တဲ့နှင့်သူမသညျဘုရားသခငျယနေ့အထိကျွန်တော်တို့ကိုမလိုချင်ဘူးဆိုတာသူ့ကိုယ်သူကြောင့်ဆောင်ခဲ့. ကျွန်မယောက်ျားတွေနှင့်အတူနယ်နိမိတ်ရှိလိမ့်မယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားသစ္စာလုပ် (ငါလုံးဝနီးပါးငါ့အရှက်ကြောက်စိတ် outgrowing နှင့်အတူပြုသည်ကိုငါငါထင်). ငါလက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုအတွက်ပေမယ့်အတိတ်အပေါ်နဲ့ off အချို့သောအရာတို့ကိုကယ်တင်မယ်လို့2ငါစိတ်ဓာတ်ကျလာတာတော့ပြီးပြီနှစ်ပေါင်း. ငါအထီးကျန်ခံစားရတယ်င့်. ငါမှားဘာသိချင်နဲ့ကျွန်မကောင်းသောအလုံအလောက်ပေါ့လျှင်. ငါမင့်. ငါတိုင်းကျမ်းမသိရပါဘူး. ငါအများကြီးပိုပြီးလေ့လာဖို့ရန်လိုအပ်. ငါကြိုးစားနေခဲ့တာနဲ့ကျွန်မပဲမဆိုကောင်လေးသိရန်ရချင်ကြပါဘူးငါဝမ်းနည်းပက်လက်ဖြစ်လာနိုင်ပြီးထိုသူသည်ဘုရားသခင်၏အကြှနျုပျကိုချချင်ပါဘူးတဲ့လမ်းကြောင်းကိုငါ့ကိုချဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်သောကြောင့်ငါမူကားအထီးကျန်ရ. ဒါဟာမေတ္တာ၌အခြားလူငယ်ကလူကိုမြင်ရဖို့အစဉ်အမြဲလှပသောင်. သူတို့အနေဖြင့်လက်ထပ်နှင့်ငါကမနာလိုဖြစ်ကောင်းသောမဟုတ်ဘူးသိလျှင်သူကတောင်ဒီထက်ကောင်းတဲ့ပေမယ်လူတိုင်းကပြောပါတယ် “oh, ဒါကြောင့်သင့်အချိန်ကာလအတွင်းလာလိမ့်မယ်”. ငါသည်နောက်ကျမှန်မှန်စဉ်းစား. ငါသည်ဤကယ့်ကိုကောင်းတဲ့ကောင်လေးတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး. ကျနော်တို့အလွန်ဆင်တူကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရှိပေမယ့်သူကဘုရားကျောင်းမသွားဘူးဟုပြောသည်. သူကကျွန်မတစ်ခုခုနောင်တသွားတာပါလျှင်သူတက်ကြွစွာဘုရားသခင်ကိုရှာရဲ့စဉ်းစားကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကဘုရားသခင်၌ ယုံကြည်. ငါပြီးပြည့်စုံဘူးဒါပေမယ့်ငါအကူအညီနဲ့ပေမယ့်အံ့သြစရာမဟုတ်နိုင်ကိုသိရဟုဆိုသည်. အမြိုးသမီးမြားတို့သညျငါကြားကြိုးစားပြောင်းလဲပစ်ရန်ထင်ကြသည်မဟုတ်. ဒါဟာပါမယ်စိတ်ပျက်စေပါတယ်. ကောင်းစွာ, ငါစောင့်ဆိုင်းငြီးငွေ့ပေါ့. ငါသည်ခဲယဉ်းလမ်းသင်ယူပါလိမ့်မယ်ခန့်မှန်း. ငါသော်လည်းလိင်ဆက်ဆံမဟုတ်ပါဘူး. ငါရယ် 23 ဆဲကြောင်းအပေါ်ခိုင်မာတဲ့ရပ်ငါမူကားအဘယ်ကြောင့်ယခုတွင်ငါသည်တစ်ဦးခင်ပွန်းထိုက်ပါဘူးထွေးတယ်. အခြားသူလူတိုင်းကိုသူတို့လိုချင်တာတွေရရှိသွားတဲ့. ဒါဟာငါယောက်ျားတွေစဉ်းစားရပ်တန့်မနိုင်နိုင်အောင်နှောင့်အယှက်မယ့်. ငါဒါတစ်ခါတစ်ရံတွင်စိတ်ကျရောဂါရ. ငါသည်ဤကောင်လေးလက်ထပ်ထိမ်းမြားသူပြောင်းလဲပစ်မထားပါဘူး အကယ်. ကျနော်တို့မတူညီစွာ လက်ခံ. ပါလိမ့်မည်? အချို့လူများကအရာအားလုံးကိုရှိ. ထိုအခါငါပိုက်ဆံပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး. ကိုယ့်ငါ့ကိုတန်ဖိုးထားသူတစ်ဦးချင်. ရှင်းပြဖို့သိပ်ဒါဟာင်.
နာတာလီ • မတ်လ 11, 2015 တွင် 1:21 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
သင်ဆဲသာဖြစ်ကြောင်း 23! :) ယင်းရှာဖွေတာမဟုတ်ဘူးစိတ်မပူပါနဲ့ “မှန်သော” တစ်, အကောင်းတစ်ဦး option ကိုကြောင်းအဲဒီမှာအထဲကပဲလူတစ်ဦးမျှမရှိ. ရုံရှင်းလင်းဖို့: သင် Worth အိုင်တီကွ. သင်နှင့်ဤမြေကြီးပေါ်မှာရှိသောဤအချိန်တွင်ဖြစ်ကြောင်းအကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်. သငျသညျယရှေုအားအဖိုးတန်များမှာ, သင်ကတန်ဖိုးရှိမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုစဉ်းစားရန်စတင်သောအခါအဖွင့်သူ့ကတိတော်များကိုဖတ်ခြင်းနှင့်တောင်းဆို. အကြှနျုပျ၏အကွိုကျဆုံးသည်: “ငါသည်သင်တို့ကိုစွန့်ခွာသို့မဟုတ်သင်စွန့်ဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။”
ငါမကြာသေးမီကသိတယ်တစ်စုံတစ်ဦးကကွာရှင်းတယ်, နှင့်၎င်းတို့၏အိမ်ထောင်ရေးမှာကြီးမားတဲ့ပြဿနာသူမကတစ်ဦးယုံကြည်သူနှင့်သူမဟုတျကွောငျးခဲ့သည်. သငျသညျလုပ်ရပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးကဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်လိမ့်မည် “ဘုရားသခင့တန်ဖိုးရှိထိုသို့?” စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့နှင့်တကွသခင်ဘုရားရှာကြံသိမ်းဆည်းထားပါ, သူသညျလညျးသငျသညျကိုညွှန်ကြားပါလိမ့်မယ်. သူသည်သင်တို့ကိုလမျးညှနျပါမညျ. သငျသညျလွှမ်းခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါခံစားရသည့်အခါသူသည်သင်တို့လိုအပ်သောအားပေးမှုပေးသွားမှာပါ. ကျွန်မအိပ်ရာမဝင်ခင်မှာအရမ်းအထောက်အကူဖြစ်စေတွေ့ပြီတစ်ခုခုအသံကျယ်ကျမ်းစာ၌ထုတ်ဖတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်, ငါနှိမ့်ချခံစားရနှင့်ရန်သူအနေဖြင့်တိုက်ခိုက်မှုအောက်မှာအထူးသဖြင့်လာသောအခါ. သငျသညျဘုရားသခငျသညျရုံထောင့်ပတ်လည်မှာရှိပါတယ်အရာကိုသိဘူး။. သာလျှင်သင်စောင့်ဆိုင်း. ငါကဒါကြောင့်ခက်နှင့်ရိုးရိုးသားသားအသံကိုသိရ, စိတ်ဆိုးစေသော, သင်မူကားထာဝရဘုရားကိုရှာကြံစောင့်ရှောက်မည်ဆိုပါက, သူသည်ဤရာသီ၌သင်တို့ကိုဝစွာကျွေးမည်. သငျသညျရာသီ၌ရှိကြ၏အကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်! သငျသညျဘုရားသခငျသညျတူညီသောအရာတွေနဲ့ရုန်းကန်နေရသူအကူအညီနဲ့အခြားလူငယ်မိန်းကလေးများအားသက်သေဖြစ်မည်အဖြစ်အသုံးပြုရန်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုသိဘယ်တော့မှ! :) ငါသညျဤအခြို့သောလမ်းအတွက်အကူအညီပေးခဲ့မျှော်လင့်ပါတယ်! မင်္ဂလာသက်!
tshireletsopreciousntumo • နိုဝင်ဘာလ 7, 2014 တွင် 2:43 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Micheala • မတ်လ 22, 2015 တွင် 8:32 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါမှာလက်ထပ်ပြီး 21 ထိုသို့လှပသောခဲ့သည် …
ကျွန်မငယ်ရွယ်လက်ထပ်ဖို့အမျိုးအစားဖြစ်နှင့်ပေါ်ထွက်လက်လွတ်မယ်လို့ထင်ဘယ်တော့မှမ “ပျော်စရာအမှုအရာ” ဘဝမှာ .. ဒါပေမယ့်ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြု. စဉ်းစားကြဘူး, ကိုယ့်ကိုငါ့ shared “ပျော်စရာအမှုအရာ” တစ်စုံတစ်ဦးကမေတ္တာနှင့်မရှိဘဲနေထိုင်နေကြစိတ်ကူးနိုင်ဘူး.
Gisselle • မတ်လ 28, 2015 တွင် 7:41 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
မင်္ဂလာပါကျနော်ဟွန်ဒူးရပ်စ်အနေဖြင့်ပေါ့ Gisselle ငါရယ်. ငါရယ် 18 အဟောင်းနှစ်နှင့်ငါ့ရည်းစားသည် 19. ကျနော်တို့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး 15 နယူးယောက်ရှိသူ၏အသင်းတော်၌ months ago! ငါဟွန်ဒူးရပ်စ်တွင်နေထိုင်ကြသည်။. ဒါကြောင့်တစ်ဦးရှည်လျားသောအကွာအဝေးကြားဆက်ဆံရေးခဲ့. ကျွန်မကောလိပ်ငါ၏ဒုတိယနှစ်တွင်ဒါသူအဖြစ်ပေါ့. ကျနော်တို့လက်ထပ်ရတဲ့အကြောင်းပြောပြီးပြီ. နှင့်သူ၏ဘုရားကျောင်းအထောက်အပံ့များကိုအထဲကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းများနှင့်အသက်ကြီးသူအချို့နှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပြုကြဖို့အကောင်းဆုံးအရာပါပဲ. ငါနေဆဲကအကြောင်းမလုံခြုံဘူး။. ငါ့အမေငါ့ကိုငယ်ရွယ်ဒါဒါငါ့အညီအစ်မတွေအဖြစ်လက်ထပ်ရတဲ့အကြောင်းကိုသိပ်ပွင့်လင်းမဟုတ်ပါဘူး. ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုအဖြစ်လက်ထပ်ထိမ်းမြားစဉ်းစားကတည်းကကျနော်တို့ဆုတောငျးလကျြပြီ. သငျသညျအကြှနျုပျ၏အီးမေးလ်ငါ့ကိုရေးလိုက်နိုင်ခဲ့ပါလျှင်ကိုယ့်ကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မယ်!
ဂျနီဖာ • ဇူလိုင်လ 8, 2015 တွင် 3:11 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ကျနော်တို့လက်ထပ်ခဲ့ကြ 21 လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာ. ငါခဲ့သည် 19 နှင့်ကျွန်မခင်ပွန်းခဲ့သည် 21. ကျနော်တို့ပိုမိုနီးကပ်စွာအချင်းချင်းရန်နှင့်ဘုရားသခင်အားရေးဆွဲခဲ့ကြ. သုံးလေးတွေနောက်ပိုင်းမှာကျနော်တို့လာမယ့်မျှော်လင့်နေကြပါတယ် 20.
ချားလ်စ် • သြဂုတ်လ 9, 2015 တွင် 11:07 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ကိုယ့်ကိုသင်ကိုးကွယ်ရာစကားလုံးတရားကိုဟောပြောသောဖြောင့်ရှေ့ကိုလမ်းများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ခဲ့တယ်. ကိုယ့်ကို 'Fallin watched’ ဂီတလမ်းကြောင်းနှင့်သွေးဆောင်၏တစ်ရက်အပြီးဗီဒီယိုနှင့်ခံစားဘုရားသခငျသညျညာဘက်ငါမှတဆင့်မယ်အဘယျသို့သို့မိန့်တော်မူသော်လည်းအဖြစ်. ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း၏အံ့သြဖွယ်လက်ဆောင်ပေးမယ်ကျနော်တို့ရှယ်ယာမထားဘဲတိုင်းတာသို့မဟုတ်ယူမရနိုငျသော. ဘုရားသခင့်ဖြင့်ငါလမ်းလျှောက်အတွက်ဒါအခြေခံတစ်ခုခုမှငါ့မျက်စိ Re-ဖွင့်လှစ်ဘို့ဤမျှလောက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်. ငါသညျလညျးဘုရားသခငျသညျသငျ့ဓမ်မအမှု၌သင်တို့ကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူမည်အကြောင်းဆုတောင်းပဌနာ.
Chidera • သြဂုတ်လ 18, 2015 တွင် 2:48 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဘုရားသခင့ပြပွဲပြီးတာနဲ့သင်ကတစ်စုံတစ်ဦးနှင့်လူတစ်ဦးသင်နှင့်သင်နှင့်အတူအပေါင်းတို့သည်လမ်းလျှောက်လှမ်းဖို့အဆင်သင့်အဖြစ်ဘုရားသခင်အဘို့တူညီစိတ်အားထက်သန်မှုရှိပါတယ်. ဘာကိုအသက်အရွယ်အရေးမပါဘူး, အချိန်ကိုသင်လက်ထပ်ထိမ်းမြားလာတကြိမ်. အဆိုပါအရာပဲသင်၏အကျင့်ရှိသမျှတို့ကိုထဲမှာသူ့ကိုအသိအမှတျပွုဖြစ်ပါတယ်, သူသည်သင်၏လမ်းခရီးဖြောင့်ပါစေလိမ့်မယ် (သုတ်တံ 3:6). ရုံဘုရားသခငျသညျအဘို့စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်ချစ်ခြင်းရှိ, လက်ျာအချိန်တွင်သူကအားလုံးကို ဖြတ်. သင်တို့နှင့်အတူရပ်မယ်တော်မူသောသင်တို့ helpmate အတူသင်တို့သည်ပါလိမ့်မယ်. ဘာတစ်ခုမှမရစိတျအပိုငျးသလား, ထို့နောက်ဘုရားသခင်နှင့်အတူတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုမရကြဘူး. သင်၏အကျင့်၏အားလုံးအတွက်သူ့ကိုဝန်ခံ, သင့်ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖြောင့်ပါစေ he'ell.
Stacy • ဒီဇင်ဘာလ 14, 2015 တွင် 3:57 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ကျွန်မခင်ပွန်းသည် 3/4 အနက်ရောင်နှင့်လေးပုံတပုံဖြူ၏။(ကြှနျုပျကမကျြနှာဖွူပါ). ကျွန်မခင်ပွန်းငါသည်လည်းငယ်ရွယ်လက်ထပ် 18 သွား 19 နှင့်ကျွန်မခင်ပွန်းခဲ့သည် 20. လူမဟုတ်ဟုဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောသည်, ကျွန်တော်တစ်ဦးအမှားလုပ်ခဲ့ကြသည်နှင့်ကွာရှင်းအတွက်ပေးပို့ပါလိမ့်မယ်. ကျနော်တို့လက်ထပ်ပြီးနှင့်ယခုကျွန်တော်ပါပြီစကားကိုနားမထောင်ခဲ့ကြ 16 အနှစ်. ဘုရားသခင့ထိန်းချုပ်မှု၌တည်ရှိ၏.
jaysmith • မတ်လ 12, 2016 တွင် 7:34 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ကီဗင်–သငျသညျအနညျးငယျသောအရာတို့ကိုချပြီကဲ့သို့သင်တို့ထင်ရ. ထိုအသင်သည်သင်၏လမ်းဖွင့်အလုပ်လုပ်နေကြ. ဆက်လုပ်ပါ, ဆိတ်သငယ်! အဆုံးမှာ, ဝက်အဖြစ်ကောင်းစွာကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိပါဖို့ vattle အများစုဖြစ်ပါသည်, မည်သည့်ချို့ယွင်းချက်ရှိနေသော်လည်း. မင်္ဂလာသက်!
TheRealHonestTruth • မတ်လ 27, 2016 တွင် 2:44 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ကောင်းပြီသူတို့ကယ့်ကိုရသောအခါတိုင်ကြားမှ NO အကြောင်းပြချက်ရှိသင့်ပြီးကတည်းကအားလုံးမှာ NO ကျန်းမာရေးပြဿနာများနှင့်အတူအလွန် Excellent ကကံနှင့်အတူမင်္ဂလာရှိကြပြီနဲ့ငွေအများကြီးနဲ့မိသားစုနှင့်အတူလက်ထပ်ခံရခြင်းကြောင့်အဲဒီမှာအထဲကလူအဆက်ဆက်များအတွက်အလွန်ကျေးဇူးတင်ဖြစ်ဤမျှလောက်ရှိသည် ကျွန်တော်တို့ကိုများစွာသောသင်သည်များစွာသောအတူတူနေတုန်းပဲယနေ့ဖြစ်ကြောင်းသင်သည်အများကြီးရှိပါတယ်ရာလည်းငယ်ရွယ်လက်ထပ်ရခဲ့ပါသော်လည်းအားလုံးမှာကံကောင်းသည်ဟုမများမှာ.
Tye စမစ် • ဇွန်လ 26, 2016 တွင် 9:55 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
အလွန်ကွံသူသောကြာနေ့တွင် elivate စခန်းဆီသို့ရောက် လာ. , 24/6/2016
RachelSanchez • နိုဝင်ဘာလ 2, 2016 တွင် 1:14 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ကျွန်မခင်ပွန်းနဲ့ကျွန်မယခုနှစ်အစောပိုင်းကလက်ထပ်ပြီး. သူသည်အ 22, ငါနံနက် 21. ငါသည်ခပ်သိမ်းသောအချိန်ကိုအဘယ်ကြောင့်ငါမယ်ဆိုတာကိုမေးမြန်းရ “ကြှနျတေျာ့လူငယ်စွန့်ပစ်” သို့မဟုတ်အဘယ်ကြောင့်ငါပင်ကောလိပ်အတွက်လက်ထပ်ရတဲ့စဉ်းစားမယ်လို့. ကျွန်မအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ငါ့အပေါ်မှာချကြည့်ဖို့ပုံပေါ်သောသူဟောင်းများကိုအမျိုးသမီးတွေထဲကနေအများဆုံးဆိုးမှတ်ချက်များ get. ဒါဟာအခြားသူများကိုငါတကယ်တကယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာငါ့အပါဆုံးအကြိုက်ဆုံးလူတစ်ဦးနဲ့ငါ့လူငယ်ခံစားသူဖြစ်ကြောင်းကိုအသိအမှတျမနိုငျကွောငျး heartbreaking ရဲ့. လာသောအခါလူများကဝမ်းနည်းင် (ပင်အဟောင်းသားစဉ်မြေးဆက်) ပတ်လည်အိပ်ပျော်ခြင်းမှ၎င်းတို့၏အသက် 20 အရွယ်ရှိလူများအဘို့အဿုံဒဏ်ငွေမယ့်ထင်, သူတို့လက်ထပ်ရသည့်အခါဒါပေမယ့် shocking ရွံရှာဘွယ်သောရဲ့. ကျနော်တို့ရုံကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်ထောင်ကိုသူတို့အဆင်သင့်ခံစားရသောအခါခုန်ယူအခြားသူတွေလာအောင်နှိုးဆွနိုင်ပါတယ်မျှော်လင့်ပါတယ်, မသက်ဆိုင်လူ့အဖွဲ့အစည်းသူတို့ကိုပြောထားသည်အရာကို.
အဆိုပါအရမျးဝမျးနညျးအမှန်တရား • နိုဝင်ဘာလ 27, 2017 တွင် 8:09 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ထိုအခါတကယ်နှင့်အတူဆင်းအခြေချရန်ကောင်းတစ်ဦးအမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်တွေ့ဆုံရန်မျှော်လင့်ခဲ့ကြသည်ကိုများစွာသောကောင်းသောတစ်ခုတည်းယောက်ျားရှိပါတယ်, ဒါပေမဲ့ကံမကောင်းတာကပါသေးသည်ငါတို့အဘို့ဖြစ်ပျက်မထားပါဘူး. အလွန်အလွန့်အလွန်အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးများအတွက်ကျေးဇူးတင်ဖြစ်သင်အမှန်တကယ်ဒါအလွန်ရှိသည်သောတစ်မိသားစုရှိသည်မှကောင်းကြီးမင်္ဂလာခဲ့ကြသည်သောယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့အဘို့.
alvina.reborn • ဇန္နဝါရီလ 3, 2018 တွင် 2:39 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ခရီးစဉ် alot ကျေးဇူးတင်ပါသည်. နှစ်ပေါင်းငါသာအခြို့သောအသက်အရွယ်အတိတ်လက်ထပ်ရနိုင်သည်ကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်. သို့သော်ယခုငါပိုကောင်းကိုသိရ.